ဆရာမလေးကိုသားမယားပွုကငျြ့ခွငျး – My Blog
ကောငျလေးတဈယောကျနဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျအိမျထောငျပွုမညျဆိုလြှငျထုံးတမျးစဉျလာအရမင်ျဂလာလကျထကျပှဲကို ကငျြးပ လရှေိ့ကွတယျ။ နယျခွားနတေဲ့စုံတှဲတှဆေိုတဈဖကျမှာတဈပှဲစီကငျြးပကတြယျ။အမြားအားဖွငျ့မိနျးကလေးဘကျမှာ ကငျြးပလရှေိ့ပါတယျ။ အခြို့သောသူတှအေဖို့တဈပှဲသာကငျြးပသဖွငျ့ကနျြတဈဖကျကအပေါငျးအသငျးမိတျဆှတှေအေခကျတှေ့ ကွရတယျ။ ယခုဇာတျလမျးကထိုပွသနာကိုအစပွုပွီးအိအိငွိမျးဆိုတဲ့ကောငျမလေးအတှကျလမျးနှဈသှယျကိုပျေါပေါကျစခေဲ့ တယျ။ တဈခုကိုရှေးခယျြရငျကနျြတဈခုကိုရငျနာစှာစှနျ့ပဈရမှာပါ…။ အလယျတနျးပွဆရာမလေးအိအိငွိမျးခဈြသောကိုနှငျ့ အိမျထောငျရကျသားကပြွီဖွဈ၍ကိုအလုပျသှားခြိနျစနနေတှေ့ငျအိအိငွိမျး တဈယောကျတညျးအိမျတှငျကနျြခဲ့သညျ။ အိအိငွိမျးမှာ ကိုနှငျ့မင်ျဂလာဆောငျပွီးသညျမှစ၍ကိုနှငျ့တဈခါသာခဈြဖူးသေးသညျ။ အိအိငွိမျးမှာဗိုငျးကောငျးကြောကျဖိမိနျးကလေးဖွဈသဖွငျ့ ကိုကအိအိငွိမျးငွငျးဆနျသဖွငျ့အင်ျကြီမခြှတျဖူးသေး။ ဟိုနကေ့ထဘီလေးကိုအသာလှနျကာ၃မိနဈခနျ့လုပျပွီးလြှငျကိုကပွီးသှား သညျ။ အိအိငွိမျးမှာအသကျ၂၅နှဈခနျ့ရှိပွီးအသားလေးကဖွူဝငျးစိုပွညျသညျ။ အထူးသဖွငျ့နကျမှောငျနသေောဆံကသောလေး မြားမှာအိအိငွိမျးကိုမဟာဆနျ၍ကကျြသရရှေိစသေညျ။
အရပျက၅ပေ၆လကျမခနျ့ရှိပွီးအရပျနှငျ့လိုကျအောငျပငျခန်ဓာကိုယျကသူ့ နရောနှငျ့သူအခြိုးကနြသေညျ။ သေးသှယျသောခါးလေးအောကျမှစှငျ့ကားလုံးဝနျးသောတငျသားမြားနှငျ့မို့တငျး၍ကွှရှနသေော ရငျသားနှဈမှာတို့မှာမွငျသူပုရိသတို့ကိုလညျပွနျငေးစသေညျ။ ကြောငျးခြိနျတှငျဆိုလြှငျအိအိငွိမျးသညျပါးတှငျသနပျခါးလေးမြားပါး ပါးလိမျး၍သူမဧ။ျနကျမောငျလှသောဆံပငျမြားကိုထုံးထားသညျမှာ ခနျ့ညားခြောမောလှနျးလှသညျ။ နခေ့ငျးအခြိနျမြားသညျ ဆရာမလေးအိအိငွိမျး၏ကိုယျလုံးအလှဆုံးအခြိနျဖွဈသညျ။ဆရာမလေး၏ကြောငျးစိမျးအင်ျကြီမှာအလှနျပါးလှာ သညျမဟုတျ သျောလညျးတျောတျောလေးကိုပါးသညျ။ထိုအခါကြောငျးအင်ျကြီအဖွူရောငျအောကျမှာထငျရှားလှသော အသားရောငျမွနျမာ ဘျောလီနှငျ့ဝငျးဝါလှပသောနို့အုံကွီးမြားကိုအထငျအရှားမွငျနရေတတျသညျ။ ဆရာမ၏ဘျောလီပျေါမှ၃ပုံ၁ပုံခနျ့လြှံထှကျနသေော နို့အုံကွီးသညျလညျးမွငျသမြှယောကျြားတိုငျးအားစိနျချေါနသေလိုဖွဈနသေညျ။
ဆရာမလေးအိအိငွိမျးမြားလမျးလြှောကျလိုကျရငျ အဖွူရောငျခါးတိုရငျဖုံးလေးနှငျ့ကြောငျးစိမျးထမီအထကျဆငျလေးကွားမှပျေါထှကျ လာတဲ့ဖွူဖှေးခြောမှတျနတေဲ့ခါးစပျနရော လေးကဝငျးခနဲဝငျးခနဲ…ခပျတငျးတငျးဆှဲစညျးထားသောအထကျဆငျလေးအောကျမှတငျးရငျးကားထှကျနသေောတငျသားစိုငျတို့မှာ နိမျ့ခညျြမွငျ့ခညျြဖွငျ့ ခါးကငျြကငျြလေးအောကျမှသိသာထငျရှားစှာကားထှကျနတေယျ….တငျသားတို့ရဲ့အောကျပိုငျးနရောလေးမှာ လညျးသိသာထငျရှားစှာပျေါထှကျနတေဲ့အောကျခံဘောငျးဘီကွိုးလေးမှာအစငျးလိုကျ အထငျးသား….စဈကိုငျးအိုးးးလားဂဈတာရှိ တျလား…မငျးကွီးကွိုကျလား..အို…..ဘာနဲ့တငျစားခိုငျးနှိုငျးရမလဲမသိတော့။ လမျးလြှောကျဟနျစကားပွောဟနျတို့မှာလညျးသိမျ သိမျမှမှေ့တေို့းတိုးညငျးညငျးလေးဖွဈသညျ။ရုပျရညျလေးမှာလှသညျဆိုသညျထကျခြောသညျဆိုလြှငျပိုမှနျမညျ။ တစိမျ့စိမျ့ကွညျ့ လရေငျထဲထိစသေညျ့အလှပိုငျရှငျမြိုးဖွဈသညျ။
မင်ျဂလာဆောငျပွီးခါစသုံးရကျသာရှိသေးတဲ့အသဈဆကျဆကျဇနီးသညျလေးအိ အိငွိမျးအိမျတံခါးခေါကျသံကွောငျ့အပွေးကလေး ထှကျလာမိသညျ။လငျသားကိုမငျးသဈအလုပျပွနျလာရငျကွိုဖို့အလှဆုံးပွငျပွီး အပွေးကလေးထှကျလာခွငျးဖွဈသညျ။တံခါးလေး ဖှငျ့ပေးသောအခါကိုမငျးသဈအပွငျသူငယျခငျြးနှဈယောကျပါလာလသေညျ။ ”အျော…ဧညျ့သညျတှပေါလား…အိမျထဲကွှပါရှငျ့” အသီးသီးအခနျးထဲဝငျလိုကျကွလသေညျ။ ”မိနျးမရေ….ဒီနရေုံ့းကကောငျတှကေိုလညျးပွုစုရသေးတယျ…ကိုအိမျပွနျနောကျကြ လို့စိတျမဆိုးနဲ့နျော…” အသံကနညျးနညျးမူးစပျစပျဖွဈနသေညျ။ ”ရပါတယျအကိုရယျ…အိတို့မင်ျဂလာဆောငျကအဝေးမှာဆောငျ တာဆိုတော့သူတို့ကိုပွနျဧညျ့ခံရမှာပေါ့” ”မှနျတာပေါ့မိနျးမရာ…ဒီကနှဈယောကျကဒီကှနျဒိုကအိမျနီးနားခငျြးတှပေါ..” အိအိငွိမျး အပွုံးလေးဖွငျ့နှုတျဆကျလိုကျသညျ။
မငျးသဈလြှာလေးအာလေးဖွငျ့ ”ဒီဘကျကသနျးကွိုငျတဲ့သူကရှအေ့ခနျးက၊ဒီဘကျကအောငျ မောငျးတဲ့သူကအောကျထပျကသူတို့ကိုပွုစုဖို့ချေါလာတာ၊ဒီမှာအရကျနဲ့ဘီယာပါလာတယျ…မိနျးမအမွညျးတဈခုခုစီစဉျပေး” ”ကောငျးပါပွီရှငျ့…ရပါစမေယျ” အိအိငွိမျးနောကျဘေးခနျးကိုတညျငွိမျစှာထှကျသှားလသေညျ။သူမရဲ့နိမျ့ခညျြမွငျ့ခညျြတငျသား တှနေဲ့နောကျကြောအလှကိုသနျးကွိုငျမကျြစိတဈဆုံးအရသာခံကွညျ့ရှုလိုကျလသေညျ။သူမ၏ဖငျတုံးကွီးတှတေုနျခါသှားတာ ကွညျ့ရငျးသနျးကွိုငျတံထှေးသာမြိုခနြမေိသညျ။ဒီဆျောလေးကိုဖငျကုနျးခိုငျးပွီးနောကျကနခှေလိုးလိုကျရရငျတော့သပြေျောပါပွီလို့ တှေးမိသညျ။ သနျးကွိုငျဒီနတေ့ျောတျောတငျးနသေညျ။ အလုပျနောကျကလြို့သူဌေးကကောသညျ။ဘာမဆိုငျညာမဆိုငျစောကျ ကုလားတှဘောဖွဈတယျ၊ညာဖွဈတယျဆိုပွီးအဆဲခံလိုကျရ သေးသညျ။အသားမဲတာနဲ့ပဲလူလူခငျြးခှဲခွားဆကျဆံနကွေတာကိုး။ ဒီတိုကျခနျးကမိနျးမကတျောတျောခြောတယျ။ဆရာမလေးတဲ့။ရောကျလာတာ၂ရကျပဲရှိသေးသညျ။
အခုတော့သူ့ယောကျြားဖွဈသူ ကမိတျဆကျပေးတော့သခြောကွညျ့မိသညျ။ တျောတျောခြောပွီးတျောတျောလဲတောငျ့ကွောငျးအနီးကပျကွညျ့မှပိုသိလိုကျရသညျ။ ”ကဲကိုယျ့လူတို့…ကြှနျတျောလညျးသှားကူလိုကျအုနျးမယျခဏ…ခဏ” မငျးသဈလညျးအိအိငွိမျးနောကျလိုကျသှားလသေညျ။မ ကွာမီအိအိငွိမျးရောကျလာကာစားပှဲခုံပျေါဖနျခှကျလေးတှလောခပြေးသညျ။ စားပှဲကိုခါးလေးကုနျးကာခဖြနျခှကျခလြိုကျသညျမို့ ဟိုကျသှားသောအင်ျကြီကွောငျ့အိအိငွိမျးရဲ့ရငျသားဖှေးဖှေးနုနုတှကေိုသနျးကွိုငျနဲ့ အောငျမောငျးထပျမွငျလိုကျရတော့လီးတှေ တောငျကုနျကသြညျ။အိအိငွိမျးရငျသားဖှေးဖှေးတှကေိုဘျောလီရငျပုံခှကျအထိသခြော မွငျလိုကျရတာကွောငျ့သနျးကွိုငျမကျြစိထဲ ကမထှကျနိုငျတော့။ သနျးကွိုငျကတော့အိအိငွိမျးကိုစိတျထဲကနအေသမေုဒိမျးကငျြ့နပွေီ။ အိအိငွိမျးအမွညျးစီစဉျရနျထပျဝငျ သှားပွနျပွီ။ကုလားဒိနျသနျးကွိုငျကကာမလိုကျစားတဲ့လူတဈယောကျ။သူ့မှာအိပျဆေးတှကှေနျဒုံးတှအေမွဲဆောငျထားတတျတယျ။ သနျးကွိုငျဖနျခှကျတှထေဲအရကျတှထေညျ့ပေးထားလိုကျသညျ။
အိအိငွိမျးရဲ့ခှကျထဲအခြိုရညျထညျ့ကာ အိပျဆေးမှုနျ့လေးခတျ ပေးလိုကျသညျ။မငျးသဈခှကျထဲလညျးနညျးနညျးထညျ့ပေးလိုကျပွီးဟနျမပကျြပွနျနလေသေညျ။ ကုလားဒိနျသနျးကွိုငျကတဈ ကိုယျထီးသမားလူရှုပျလူပှေ။အောငျမောငျးကတော့မိနျးမနဲ့ကလေးတဈယောကျနဲ့မို့သိပျအတငျ့မရဲဘဲ အကဲသာခတျနသေညျ။ မ ကွာမှီအမွညျးပှဲလေးတှကေိုငျကာမငျးသဈနှငျ့အိအိငွိမျးထှကျလာလသေညျ။ ”အဆငျသငျ့ဖွဈပွီရှငျ့…စားကွနျောအားမနာနဲ့” ”ရ ပါတယျ…ကြှနျတျောကြှဲရိုငျးထညျ့ပေးထားတယျသောကျတယျမလား” ”အားနာစရာရှငျ…အကိုတို့ပဲသောကျကွပါ” သောကျကွ စားကွစကားပွောကွရငျးအိအိငွိမျးမကျြလုံးမြားလေးကာခုံပျေါမှာတငျအိပျပြျောသှားလသေညျ။မငျးသဈနဲ့အောငျမောငျး စကား တှဖေေါငျဖှဲ့ရငျးမငျးသဈလညျးမြားပွီးမှောကျသှားလသေညျ။သနျးကွိုငျကဟနျပွသောကျထားသူမို့ ”အောငျမောငျး….မငျး…ဒီ ကောငျ့ကိုခဏအဖျောလုပျပွီးထိနျးထားကှာ…ငါအိအိငွိမျးလေးနဲ့ခဏလောကျကစားခငျြလို့..ဟဲဟဲ” ”ဟာ…ဟကေ့ောငျပွသနာ တကျမယျနျော” ”မငျးကလညျးအေးဆေးပါ….နောကျနမေ့ငျးအတှကျပါဖနျပေးမယျ” အိအိငွိမျးကိုသနျးကွိုငျအသာဆှဲထူကာ အိပျခနျးဝကိုပှခေ့ျေါသှားလသေညျ။
အိအိငွိမျးကတော့တုတျတုတျမလှုပျ။ သူအလှနျတပျမကျနသေောတှတေ့ာတောငျမကွာသေး သညျ့မိနျးမခြောလေးမို့ပှရေ့တာတောငျအရသာရှိလှနျးလှသညျ။ သနျးကွိုငျနုထှေးအိစကျနသေောအိအိငွိမျးကိုအခနျးဒေါငျ့လေးမှာ ထိုငျရပျသားလေးအနအေထားမှေးထားလိုကျသညျ။ အဆီတဈဝငျးဝငျးနဲ့အိအိငွိမျးကိုသနျးကွိုငျကာမခံစားပွီးဖကျြဆီးရတော့ မယျဆိုတဲ့အသိကွောငျ့လီးအပွတျတောငျနလေသေညျ။ သောကျလဲသောကျထားတာမို့စိတျကလဲစိတျရိုငျးဝငျမိသညျ။အခနျးထဲ ရောကျတော့တံခါးပိတျပွီးအိအိငွိမျးကိုကုတငျပျေါကနျ့လနျ့ဖွတျ ပကျလကျတငျလိုကျသညျ။သူမကတော့မူးနပွေီမို့မသိတော့။ သနျးကွိုငျကဘေးနားမှာထိုငျရငျးအကငြ်္ီခါးတိုအကွပျအောကျကနအေသကျရှူတိုငျးမို့မို့တကျလာတဲ့ရငျသားတှကေိုကွညျ့ရငျး စိတျက ထလာသညျ။အိအိငွိမျးကိုခုနကမှနျးခဲ့တာတှကေိုတှေးမိပွီးအိအိငွိမျးရဲ့နို့တှကေိုလကျကလှမျးလိုကျပွီးကိုငျလိုကျသညျ။ အိအိငွိမျးအင်ျကြီလးကိုအသာမ၍ခြှတျလိုကျလသေညျ။အထဲကဘျောလီအသားရောငျလေးကိုပါခြိတျတှတေဈခုခငျြးသသေခြောခြာ ဖွုတျပဈပွီးခြှတျလိုကျလသေညျ။စို့ခငျြစရာနို့သီးခေါငျးလေးတှကွေောငျ့သနျးကွိုငျတံထှေးတောငျမွိုခမြိသညျ။
ခဏစိတျထိနျးကာထမိနျလေးကိုအသာလေးဆကျခြှတျလိုကျသညျ။ အိအိငွိမျးရဲ့ထဘီစကပျကိုဖိနပျကိုမခြှတျတော့ပဲခြှတျလိုကျ သညျ။ပငျတီအသားရောငျလေးပဲကနျြတော့သညျ။ ဖွူဝငျးတဲ့အသားအရညျနဲ့လိုကျဖကျလှသညျ။ပငျတီပျေါကနလေကျနဲ့ထကျ အောကျပှတျဆှဲခလြိုကျသညျ။ အတှငျးခံလေးအောကျကစောကျဖုတျမို့မို့လေးကိုကုနျးနမျးကာအနံ့လေးခံလိုကျသညျ။ ”အား… အမှေးနံနဲ့အဖုတျနံလေးရောပွီးသငျးနတောပဲ” နို့တှကေိုလကျနဲ့အသာပှတျသပျကိုငျလိုကျပွီးနို့သီးခေါငျးနီနီလေးကိုငုံ့ကာစို့လိုကျ တော့အငျးခနဲအသံနဲ့အတူအိအိငွိမျးရငျဘတျက ကော့တကျလာသညျ။အိအိငွိမျးမကျြလုံးကတော့မဖှငျ့ပေ။ သနျးကွိုငျအိအိငွိမျး နို့တှကေိုစို့ရငျးလကျကပေါငျတှကေိုပှတျသပျနလေိုကျသညျ။ ပငျတီကိုခြှတျလိုကျတော့အမှေးတှကေဆေးနဲ့ခြှတျထားသညျ ထငျသညျ။ပါးပါးစုစုလေး။ သနျးကွိုငျအိအိငွိမျးရဲ့ပေါငျနှဈဖကျကိုကားလိုကျပွီးလကျခလယျနဲ့အဖုတျထဲကိုထညျ့လိုကျတော့ အဖုတျကအရညျတှနေဲ့။ အတှငျးထဲကိုဝငျသှားတော့သနျးကွိုငျလဲကလိပေးလိုကျသညျ။
ဂြီစပေါ့နရောကိုမှနျးကာခပျဆကျဆကျ ကလိလိုကျတော့အိအိငွိမျးဖငျက ကွှကွှတကျလာပွီးပါးစပျကမတိုးမကယျြအသံနဲ့ညညျးနသေညျ။ အိပျမောကနြသေောအိအိငွိမျး ခမြာမိမှေးတိုငျးဖမှေးတိုငျးဖွဈနသေညျ။ မနတေ့ဈနကေ့မှသတို့သမီးလေးဖွဈခဲ့တဲ့ယဉျယဉျကြေးကြေးနှဲ့နှဲ့နှောငျးနှောငျးမိနျးမ ခြောလေးတဈယောကျကိုအဝတျတှခြှေတျနရေတာကွောငျ့သနျးကွိုငျလီးကတအားတောငျနသေညျ။ အိအိငွိမျးပေါငျနှဈဖကျကို ထောငျဖွဲပွီးကားစလေိုကျသောအခါအိအိငွိမျးနံရံကိုမှီကာအဖုတျဖွဲပွနသေောအနအေထားဖွဈနသေညျ။ သနျးကွိုငျဘောငျးဘီထဲ ကဖုနျးကိုထုတျလိုကျပွီးအိအိငွိမျးရဲ့ခဈြစရာမကျြနှာကစပွီးရငျသားတဈပွငျလုံးနဲ့စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျး လှလှလေးပါပျေါ အောငျဓာတျပုံမြားစှာရိုကျလိုကျလသေညျ။ကနြေပျအောငျမှတျတမျးတငျပွီးသောအခါသနျးကွိုငျဘောငျးဘီဆှဲခြှတျ လိုကျလေ သညျ။ဘောငျးဘီထဲကတုတျခိုငျသနျမာလှသောဂျေါလီတပျလီးကွီးကမတျခနဲထှကျလာသညျ။အိအိငွိမျးရဲ့မကျြနာနုနုလေးကိုလီးနဲ့ လေးငါးခကျြထိုးကာအလနျးဆုံးအနအေထားကိုဓာတျပုံရိုကျပွနျသညျ။နောကျဖုနျးကိုဘေးခဏခကြာနို့အုံဖှေးဖှေးတှကေိုဆုပျကိုငျ ကာအားရအောငျစို့ပဈလိုကျသညျ။
”ဟူး….စောကျပတျလေးကစီးပိုငျမယျ့ပုံဘဲ” လီးထိပျကိုတံထှေးစှတျကာဘေးစောငျးလှဲပွီးအိ အိငွိမျးစောကျဖုတျဝကိုတကေ့ာစောကျခေါငျးထဲထိုးထညျ့လိုကျလသေညျ။ လီးဒဈကြျောရုံလောကျထိုးထညျ့လိုကျလသေညျ။လကျ တဈဖကျကဖုနျးကိုယူကာအိအိငွိမျးမကျြနှာနှငျ့အဖုတျထဲလီးဝငျနပေုံကို မှတျတမျးယူလိုကျပွနျသညျ။သနျးကွိုငျလီးပွနျထုတျကာအိ အိငွိမျးကိုခုတငျပျေါကိုယျတဈပိုငျးကုနျးကုနျးလေးတငျထားပွီး နောကျကနစေောကျပတျလေးထဲလီးထိုးခလြိုကျသညျ။ သနျးကွိုငျ လဲအိအိငွိမျးခါးလေးကိုအသာမလိုကျတော့အိအိငွိမျးဖငျကွီးကကွှလာသညျ။ အိအိငွိမျးအဖုတျထဲကိုသနျးကွိုငျလီးထညျ့လိုကျရာ ”ဗဈြ….ဗဈြ” ”အ…ဟ….ဟ….အာ့…ဟငျ….ကိုသနျးကွိုငျ…” အဖုတျထဲသို့လီးကကွပျပွီးဝငျသှားရာအိအိငွိမျးညညျးသံနဲ့အတူ မကျြလုံးပှငျ့သှားပွီးနောကျပွနျလေးလှညျ့ကွညျ့လိုကျရာသနျးကွိုငျကို တှလေို့ကျရတော့အလနျ့တကွားဖွဈသှားသညျ။အစကသူမ မူးမူးနဲ့ကိုကိုကလုပျပေးနတောလို့ထငျယောငျထငျမှားဖွဈနပွေီးအဖုတျထဲကိုလီးကွီးပွီးဝငျလာတော့နာသှားလို့ယောငျယမျး မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျရာမှသနျးကွိုငျကိုတှတေ့ော့အတငျးရုနျးတော့သနျးကွိုငျက သူမကိုဖိထားပွီးလီးကိုအဆုံးထိထညျ့လိုကျ သညျ။အိအိငွိမျးခမြာအဖုတျထဲမှာပွညျ့သိပျစှာလီးကဝငျသှားပွီးနာသှားရသညျ။
”ဖယျ…ကိုသနျးကွိုငျ…မယုတျမာနဲ့နျော…..ရှငျ့ သူငယျခငျြးရဲ့မိနျးမကိုဒီလိုလုပျစရာလား….ဖယျနျော…ကြှနျမအျောလိုကျမှာ..” ”မ ထူးပါဘူးအိရယျ…ကိုယျ့လီးတခြောငျးလုံးမငျး အဖုတျထဲကိုဝငျနပွေီဟာကို….အျောတော့လဲဘာထူးမှာလဲ…. ဘယျသူကကွားမှာမို့ လဲ…ငွိမျငွိမျသာလိုးတာခံလိုကျစမျးပါ” ”ရှငျ…ဟငျ့…လူယုတျမာ…အောကျတနျးစား…ကုလားပီပီခှေးကငျြးခှေးကွံကွံတယျ…ခှေး ကွီး…ဟငျ့…ဟငျ့” ”ငိုငို…ကွိုကျ သလောကျသာငိုစမျး…ဟဲ…ဟဲ..ကောငျးလိုကျတာကှာ….မငျးအဖုတျကလငျရှိမယားဆိုပမေယျ့ ကွပျနတောပဲ…. ရှိးးးအားးးး….လိုး လို့ကောငျးတာ…ဟားဟား” သနျးကွိုငျကွမျးပွီ။အစကဒီလောကျထိကွမျးဖို့မရှိပေ။
အိအိငွိမျးကသူ့အရှိုကျထိစမေယျ့စကားကိုနဈနဈနာနာပွောတာကွောငျ့ခုနကတညျးကစိတျထဲမှာခပျကွမျးကွမျးမှနျးဖူးတဲ့ အခံ လညျးရှိတော့စိတျကလှတျသှားသညျ။အိအိငွိမျးရုနျးရငျးကနျရငျးနဲ့တဖွညျးဖွညျးမောလာသညျ။ လူကမူးလဲမူးနတောမို့အားမပါ။ သနျးကွိုငျလဲလီးကိုမဆောငျ့သေးပဲအဆုံးထိထညျ့ထားရငျးနဲ့အိအိငွိမျးရိုကျပုတျနတောတှကေိုလကျနဲ့ လိုကျဆှဲရငျးပါးစပျကပွော ခငျြရာတှပွေောနသေညျ။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့အိအိငွိမျးအားပြော့လာတော့နို့တှကေိုလကျနဲ့ပယျပယျနယျနယျကိုငျရငျး ”အား… ကောငျးလိုကျတာကှာ…နို့တှကေအိတငျးနတောပဲ…ကောငျမဆေးတှသေုံးပွီးယောကျကြားကိုဆှဲဆောငျထားတာမလား….ဟား… ဟား….ဟား…” ”ကိုသနျးကွိုငျရယျ….တျောပါတော့….အိကိုသနားပါ….လှတျပါတော့….အဟငျ့…ဟငျ့…အိ….အိ” အိအိငွိမျးမရုနျး နိုငျတော့လပြေော့နဲ့တောငျးပနျသညျ။သနျးကွိုငျခုခြိနျမှတော့မရတော့။လူကလဲမူးနပွေီမို့စိတျရိုငျးကဝငျနပွေီ။
နောငျခါလာနောငျခါဈေးလို့သဘောထားကာရှဆေ့ကျတှနျးနသေညျ။နို့တှကေိုကိုငျလိုကျညှဈလိုကျနဲ့ပါးစပျကလဲညဈညဈညမျးညမျး တှပွေောနသေညျ။အိအိငွိမျးဘဝမှာဒီလိုတဈတဈခှခှပွောတာတခါမှမကွားဖူးသလိုအပွောလဲမခံရဘူး။ ခုလိုတစိမျးတဦးရဲ့ ပယျပယျနယျနယျကိုငျခွငျးခံရတာပထမဦးဆုံးအကွိမျပငျ။သူမယောကျြားတောငျခုလိုတခါမှမကိုငျဖူး။ သနျးကွိုငျကတဈတဈခှခှ ပွောသလိုနရောအစုံကိုလိုကျပွီးကိုငျနတောမို့စိတျကအရမျးကိုဝမျးနညျးလာပွီးကိုကို့ကိုအရမျးသတိရမိသညျ။ ကိုကို့ကိုသူမ သစ်စာဖောကျသလိုဖွဈသှားပွီလို့တှေးမိပွီးမကျြရညျကကလြာပွနျသညျ။ ဒါကိုသနျးကွိုငျကတှတေ့ော့တဟားဟားနဲ့ရယျပွီးနို့နှဈ လုံးကိုညှဈကိုငျကာခါးအားနဲ့လီးကိုဆှဲထုတျလိုကျပွီးခပျဆတျဆတျ ဆောငျ့ခလြိုကျတော့ ”အာ့…ကြှတျ..ကြှတျ…နာတယျ…ဖယျ ပါတော့…တျောပါတော့…အီး…ဟီး…ဟီး…” ”ကောငျးလိုကျတဲ့အဖုတျ…ကွပျနတောပဲလိုးရတာ…စောကျကောငျမအရမျးလိုးလို့ ကောငျးတယျကှာ” ပွောပွောဆိုဆိုသနျးကွိုငျတယောကျကွမျးပွီ။
အိအိငွိမျးတယောကျဝမျးနညျးပကျလကျနဲ့ငိုနပေမေယျ့ တဖွညျးဖွညျးအဖုတျထဲကလီးကို မသိမသာလကျခံလာသညျ။အရညျတှကေထှကျလာကာလီးကအဝငျအထှကျခြောလာသညျ။ သနျးကွိုငျရဲ့ဆောငျ့အားကအားနဲ့မာနျနဲ့ဆောငျ့နတောမို့တခကျြဆောငျ့တိုငျးအငျ့ခနဲအငျ့ခနဲဖွဈဖွဈသှားကာသားအိမျဝကပူခနဲပူခနဲ ဖွဈ သှားသညျ။အသိစိတျနဲ့လူကငွငျးဆနျနပေမေယျ့ကိုယျခန်ဓာအစိတျအပိုငျးတှကေတဖွညျးဖွညျးလကျခံလာသညျ။ ပွညျ့ဝတဲ့ အရသာကတကိုယျလုံးကိုဖွညျးဖွညျးခငျြးပြံ့နှံ့လာသညျ။ သနျးကွိုငျကအိအိငွိမျးနားနားကိုကပျကာတဈတဈခှခှတှပွေောပွီး ဆောငျ့နဆေဲပငျ။ ”အ…ဟငျ့ဟငျ့…အငျ့…အငျ့…အငျ့…တျောပွီ…တျောပွီ…ဟငျ့…ဟငျ့…” နှုတျခမျးကငွငျးနပေမေယျ့သူမယောကျ ကြားနဲ့ကှာခွားစှာကာမအရသာကိုပွညျ့ဝစှာပေးနတောကိုစိတျကတဖွညျးဖွညျးပါလာသညျ။ သူမငွငျးဆနျခငျြသညျ။မဟုတျဘူးဒါ ငါမဟုတျဘူး။
ငါ့ကိုတခွားလူတယောကျကမုဒိနျးကငျြ့နတော။ ငါလကျသငျ့မခံဘူးတှေးနပေမေယျ့မူးကလဲမူးဆောငျ့ခကျြတိုငျးက သူမအရငျကဘာလိုအပျမှနျးမသိတာကိုယျ့ဟာကိုယျမေးမိတဲ့အရာကဒါပါလားဆိုတာသိသှားပွီးစိတျကနှဈခှဖွဈနသေညျ။သနျး ကွိုငျလဲအိအိငွိမျးရဲ့အပွောငျးအလဲကိုသတိထားမိတာကွောငျ့အိအိငွိမျး နားကိုကပျကာစိတျကွှစရေနျထပျပွီးတဈတဈခှခှပွော လိုကျကာလီးကိုတဆုံးထုတျတဆုံးထညျ့မှနျမှနျဆောငျ့နသေညျ။ အဖုတျကအရညျတှနေဲ့လီးဝငျတိုငျးတဗွှတျဗွှတျတဗဈြဗဈြနဲ့ အသားခွငျးရိုကျတဲ့အသံကလဲအခနျးထဲမှာဆူညံနသေညျ။ အိအိငွိမျးခါးလေးကိုလကျနဲ့မ’ကာကိုယျကရှကေို့ငိုကျထားတာမို့အိအိ ငွိမျးဖငျကွီးကကွှတကျနကောလီးတခကျြဆောငျ့လိုကျတိုငျး အတှငျးထဲကိုနကျနကျဝငျသှားကာဖိလိုကျတိုငျးမှရေ့ာကအတှငျးဖကျ ဝငျသှားပွီးပွနျကနျလာပွနျတာမို့ဆောငျ့ခကျြတိုငျးက အိအိငွိမျးအတှကျရူးသှပျမှုဖွဈစသေညျ။မရတော့ပေ။အိအိငွိမျးဆန်ဒကိုအသိ နဲ့ဘယျလိုမှထိနျးခြုပျလို့မရတော့။ အထိအတှနေ့ောကျကိုကောကျကောကျပါအောငျလိုကျသှားပွီ။
မိနျးမကိစ်စကိုကြှမျးကငျြဆရာ ကတြဲ့သနျးကွိုငျရဲ့အောကျမှာကရြှုံးသှားပွီ။ ”အ…ဟ…ဟ…အငျ့…အငျ့” ”ကောငျးလား…အိ…ကောငျးလား…”မဖွေ။ဒါကွောငျ့ သနျးကွိုငျအိအိငွိမျးနို့သီးခေါငျးတှကေိုညှဈလိုကျရငျး ”ကောငျမ…မေးနတေယျ…ငါလိုးတာကောငျးလားလို့…ခံလို့ကောငျးလားဖွေ စမျး…” ”အား….ကြှတျ…ကြှတျ…ကောငျးတယျ….အ…ဟငျ့…ဟငျ့…နာတယျ” သနျးကွိုငျပွုံးလိုကျသညျ။သူတခကျြခငျြးဆောငျ့ လိုကျပွီးနို့တှကေိုခြိုငျးအောကျကလြှိုကာငုံ့စို့လိုကျသညျ။ အိအိငွိမျးစိတျကအရမျးကိုကွှလာသညျ။ ပွီးခငျြလာသညျ။အရမျး အရမျးကိုကောငျးလာကာ ”အ…အငျ့…အငျ့…ဆောငျ့…ဆောငျ့…မရပျနဲ့…ခပျနာနာလေးဆောငျ့ပေး….ကောငျးတယျ…အနျးးးးဟ နျးးးး….ကောငျးတယျ….အနျးးးး…အနျးးး…ပွီးပွီ…အဈအိ…ပွီးပွီ…အ…အ…အားးးး” အိအိငွိမျးပွီးသှားပွီ။သနျးကွိုငျဧ။ျ လညျကုပျကိုလကျနောကျပွနျလေးအတငျးဖကျကာဖငျကိုအတငျးကော့ကာကပျထားပွီး တဆတျဆတျနဲ့ဖွဈနသေညျ။ ခွတှေေ ကကုပျကှေးတကျကာပါးစပျကဘယျလိုအသံတှမှေနျးမသိ။
သနျးကွိုငျလိုးလို့မပွီးသေးပမေယျ့အိအိငွိမျးတအငျ့အငျ့အသံလေး သာထှကျရငျးပွနျအိပျပြျောသှားသညျ။ ”အားပါးပါးကပျြလိုကျတာ…စီးလိုကျတာကှာ….မငျးသဈတခါဘဲလိုးထားသေးတယျထငျ တယျ” အမှနျတကယျလညျးမင်ျဂလာဦးညတဈခါဘဲလုပျဖွဈသေးသညျ။မနကေ့မူးမှောကျသှားလို့မလုပျဖွဈ။ဒီနလေညျးမငျးသဈ မှောကျပွနျပွီဖွဈသညျမို့သနျးကွိုငျကံကောငျးနလေသေညျ။သနျးကွိုငျခပျပွငျးပွငျးပဈဆောငျ့နလေသေညျ။ဆီးစပျခွငျးတဈဘမျး ဘမျးနဲ့ထိနလေသေညျ။ခုမှသိတဲ့မိနျးကလေးကိုခိုးလိုးနရေတဲ့အသိနဲ့စီးပိုငျကပျြနသေောစောကျဖုတျကွောငျ့အခကျြနှဈဆယျ လောကျနဲ့တငျသနျးကွိုငျပွီးခငျြ သှားသညျ။သနျးကွိုငျအားကုနျပဈဆောငျ့ထညျ့လိုကျပွီးအိအိငွိမျးစောကျခေါငျးထဲလီးတဈ ဆတျဆတျတုနျကာသုကျရညျမြားပနျးထညျ့လိုကျလသေညျ။
”ဟူး…ငါလိုးမ…လိုးလို့ကောငျးလိုကျတာကှာ” လီးပွနျထုတျပွီး ဘောငျးဘီပွနျဝတျလိုကျကာနောကျဆုံးသုကျတရှဲရှဲအဖုတျထဲမှစီးကနြသေောအိအိငွိမျးကိုဓာတျပုံရိုကျယူလိုကျသညျ။တဈရှူးဖွငျ့ အိအိငွိမျးကိုသနျ့စငျပေးပွီးအဝတျအစားတှသေခြောပွနျဝတျပေးသညျ။ဘျောလီခြိတျတှကေိုလညျးကကြနြနပွနျတပျထား ပေးလိုကျသညျ။အဝတျမြားဝတျပေးပွီးနောကျတော့ပွနျထမျးချေါလာကာခုံပျေါဟနျမပကျြတငျပေးထားလိုကျလသေညျ။ ”ဟေ့ ကောငျမငျးပွီးပွီလား…ဒါဆိုလညျးပွနျမယျကှာနောကျနငေ့ါ့ကိုလညျးဖနျပေးဦးကှ” နောကျနမေ့နကျအိအိငွိမျးနိုးလာတော့၃နာရီ လောကျသာရှိသေးသညျ။အိအိငွိမျးလညျးသူမကွုံတှခေဲ့ရသောအဖွဈအပကျြကို အိပျမကျဟုသာထငျသှားပွီးရှကျပွုံးလေးတဈ ခကျြပွုံးမိလိုကျသေးသညျ။
နောကျတဈနအေိ့အိငွိမျးနလေ့ညျကြောငျးပွနျအလာအိမျတံခါးကိုသော့ဖှငျ့နတေုနျးရှအေ့ခနျးမှသနျး ကွိုငျအခနျးထဲမှထှကျလာ လသေညျ။သနျးကွိုငျပွုံးပွကာ ”ဆရာမအိအိငွိမျး…မင်ျဂလာပါ” အခြိုသာဆုံးအပွုံးလေးဖွငျ့အိအိ ငွိမျးပွုံးပွကာ ”ဟုတျကဲ့ရှငျ့…ကြှနျမညကလေ…ခေါငျးတှမေူးပွီးအိပျပြျောသှားလို့ရှငျတို့ပွနျသှားတောငျမသိလိုကျဘူး” သနျးကွိုငျ ကတော့သူ့ရှကေ့ဖွူဖွူတောငျ့တောငျ့လှလှမိနျးမခြောဆရာမလေးကိုကာမစပျယှကျရနျရငျခုနျနလေသေညျ။
အိအိငွိမျးမှာကြောငျးသှားရဦးမညျဖွဈ၍အဖွူရောငျရငျဖုံးအင်ျကြီခါးတိုလေးနှငျ့ထဘီအစိမျးလေးကိုဝတျထားသညျ။ ခါးတိုအင်ျကြီမှာ ပါးလှာသဖွငျ့နောကျမှကွညျ့လြှငျအထဲမှခြိတျ၅ခုတပျအသားရောငျဘျောလီလေးကိုထှငျးဖောကျမွငျနရေသညျ။ သခြောကွညျ့ လြှငျဘျောလီခြိတျမြားကိုပငျမွငျနိုငျသညျ။လှတျနသေောခါးသားဝငျးဝငျးလေးမှာလညျးသနျးကွိုငျကိုမွူစှယျနသေညျ။ တငျးယငျး လုံးဝနျးသောအိအိငွိမျးဧ။ျတငျသားနှဈလုံးမှာထဘီထဲမှရုနျးကွှနသေညျ။အတှငျးခံအရာလေးကိုထငျရှားစှာမွငျနရေသညျ။ ”အိအိ ငွိမျး….” ”ရှငျ…..ပွောလေ” ”အိအိငွိမျး….ဒီကောငျမလေးကိုသိလားမသိဘူး” သနျးကွိုငျအိပျကပျထဲကဖုနျးကိုထုတျကာပုံတဈခု ကိုပွလသေညျ။အိအိငွိမျးသိလိုသိငွားစူးစမျးကာကွညျ့လိုကျလသေညျ။
ပုံထဲမှာအရှကျတရားကငျးမဲ့စှာစောကျဖုတျအပွဲသားနှငျ့ မိနျးကလေးတဈယောကျပုံဖွဈနသေညျ။ အိအိငွိမျးမကျြခုံးလေးပငျ့သကျသှားကာရငျဝကိုစို့ရိုကျသလိုစူးခနဲဖွဈကာမကျြနာလညျးနီ ရဲသှားသညျ။ လကျထဲကသော့တောငျလှတျကသြှားသညျ။ ”သခြောကွညျ့အုနျး…ဒီမှာ…ဒီမှာ” အိအိငွိမျးလီးတဈခြောငျးကိုနမျး နတေဲ့ပုံတှေ၊စောကျဖုတျထဲလီးဝငျနပေုံတှေ၊နောကျဆုံးလရညျရှဲသောပုံတှကေိုကွညျ့ပွီးအိအိငွိမျး လဲပွိုလုမတတျခေါငျးတှမေူး သှားသညျ။ ရှကျလှနျးလို့မကျြနာတဈခုလုံးနီမွနျးကာသနျးကွိုငျတို့ရှကေ့နကေိုယျပြောကျသှားလိုကျခငျြမိသညျ။ ”သိလားအမ…သူ့ ကိုလိုငျးပျေါတငျပွီးဖှမလို့” ”ဟငျရှငျတို့ကြှနျမကိုညကဘာလုပျခဲ့ကွတာလညျး….ဒီပုံတှကေ….အို..ရှငျတို့ယုတျမာလိုကျတာ…ဖကျြ လိုကျပါရှငျ…တောငျးပနျပါတယျ.နျော…နျော” သနျးကွိုငျဂှငျရောကျနပွေီမို့ ”ဖကျြစခေငျြရငျကြှနျတျောတို့စိတျကွိုကျအမခန်ဓာကိုယျ ကိုပေးမလား…ဒါဆိုဘယျသူမှမသိအောငျထိနျးသိမျးထားမယျ” အိအိငွိမျးဖောကျပွနျရမညျ့ကိစ်စဖွဈနသေညျ။ကိုမငျးသဈကိုသစ်စာမ ဖေါကျခငျြပါ။
ဒါပမေယျ့ဒီဘကျကအိအိငွိမျးရဲ့ပုံတှလေူပုံအလယျမှာအရှကျမကှဲဖို့လညျးအရေးကွီးနသေညျ။လမျးနှဈသှယျကိုအိအိ ငွိမျးအခကျတှနေ့သေညျ။ ”ကွာပါတယျအမရယျ…လာ” ယဉျစစလေးဖွငျ့အိနွေ်ဒရရလေးခြောနသေောအိအိငွိမျးကိုသနျးကွိုငျ အခနျးထဲဆှဲချေါသှားလိုကျပွီးတံခါးကိုပိတျကာဂကျြထိုးလိုကျ လတေော့သညျ။ အခနျးထဲရောကျလို့ဂလနျ့ထိုးတံခါးပိတျပွီးတာနဲ့အိ အိငွိမျးပါးပွငျနုနုလေးကိုဖွနျးကနဲပိတျရိုကျပဈလိုကျသညျ။ အိအိငွိမျးခေါငျးထဲမှာကွယျတှေ၊လတှမွေငျသှားသညျ။နာလိုကျတာလဲ ပွောမနနေဲ့တော့။ မူးဝပွေီးနရောမှာပဲလဲကသြှားသညျ။ကုလားကအိအိငွိမျးကိုပှခြေီ့လာပွီးကုတငျပျေါဝုနျးကနဲပဈခလြိုကျသညျ။ ”ဘာလုပျတာလဲ…အဟငျ့” ”ပါးစပျပိတျထား…ပါးထပျရိုကျပဈလိုကျမယျ” ဒီကုလားသူ့ကိုဗငျြးတော့မယျဆိုတာအိအိငွိမျးသိပေ မယျ့သိပျမရုနျးရဲတော့ပါဘူး။ ”မလုပျပါနဲ့…ကြှနျမမှာလငျရှိတယျ…မကောငျးပါဘူး” မသိစိတျကခပျကွမျးကွမျးပွုကငျြ့ရသညျကို အရသာတှတေ့တျသောသနျးကွိုငျအဖို့တော့တောငျးပနျသံမြားကိုသနားရမညျ့အစား နားဝငျပီယံဖွဈသောသီခငျြးသံအဖွဈသာ ခံစားနရေလသေညျ။ ထို့နောကျသနျးကွိုငျကအိအိငွိမျး၏နုနုရှရှပါးပွငျလေးကိုဖနျြးခနဲဖွတျရိုကျလိုကျပွနျသညျ။
ယောကျြားကွီး တယောကျ၏အားအပွညျ့တော့သုံးထားခွငျးမဟုတျ။နာကငျြမှုကိုခံစားရုံလောကျသာဖွဈသညျ။ ထို့နောကျရငျသားအစုံအား ဆုပျနယျခွမှေလိုကျသညျ။ အတငျးဖဈြညှဈဆုပျနယျလိုကျသောကွောငျ့အရသာမရှိဘဲနာကငျြခွငျးကိုသာခံစားလိုကျရသညျ။ ငွငျး ဆိုတောငျးပနျရနျမဖွဈနိုငျကွောငျးနားလညျထားသောကွောငျ့ဘာမြှမပွောဘဲပွုသမြှကိုနုနရေရှာတော့သညျ။ ထို့နောကျတော့ ကုလားကအိအိငွိမျးအင်ျကြီကိုဆှဲဖွဲပဈသညျ။ အိအိငွိမျးလေးရဲ့ရငျဖုံးအင်ျကြီကိုရငျဘတျကနဆေောငျ့ဆှဲလိုကျတာကွောငျ့နှိပျသီးတှေ ပွုတျထှကျကုနျပွီးနို့အုံတငျးတငျးနှဈအုံက အသားရောငျဖြော့ဖြော့ဘျောလီလေးသာခံပွီးပျေါလာသညျ။ ရငျဘတျ ဟာလာဟငျးလငျးဖွဈသှားခွငျးနှငျ့အတူအိအိငွိမျး၏လှပပွညျ့တငျးသောရငျအစုံမှာလှပစှာပွူးထှကျသှားသညျ။ ဖွူဝငျးသော အသားအရညျပိုငျရှငျဖွဈသောကွောငျ့ရငျသားမြားမှာပိုမိုဖွူဝငျးကာအလှနျလှနသေညျ။
အိအိငွိမျးမကျြနှာလေးမှာနီမွနျးလကျြ မကျြရညျမြားပွညျ့နှကျနသေညျ။ ဒီနကေ့အသိစိတျရှိနတေဲ့မိနျးမခြောအကိတျလေးကိုသားမယားအဖွဈဆကျဆံရမှာမို့ကုလားဒိနျ သနျးကွိုငျလညျးတအားထနျပွီး အိအိငွိမျးရဲ့ဘျောလီကိုရငျဘတျမှဆှဲဖွုတျပဈလိုကျရာဘျောလီနောကျကြောခြိတျတှသောမက လကျမောငျးကွိုးတှပေါပွုတျ ထှကျကုနျသညျ။အိအိငွိမျးရဲ့ထှားမို့တဲ့ရငျသားလှလှတဈစုံကိုသနျးကွိုငျအငမျးမရကိုငျပွီးစို့သညျ။ ကုလားကဆရာမလေးအိအိငွိမျးပေါငျကွားမှာနရောအသအေခြာယူပွီးနို့ကွီး၂လုံးကိုကုနျးစို့တယျ။ အားနဲ့စို့လိုကျလို့အရာတှပေါ ထငျကုနျတယျ။အိအိငွိမျးရဲ့စောကျပတျအဝကိုလီးထိပျနဲ့အသအေခြာထောကျထားမို့စောကျရညျမြား စိမျ့ကလြာလပွေီ။ ”လေး ဘကျထောကျပေးစမျး” ဟုပွောလိုကျရာအိအိငွိမျးလညျးကွောကျကွောကျလနျ့လနျ့နှငျ့ကုတငျပျေါတှငျလေးဘကျထောကျ ပေးလိုကျရသညျ။ ကွောကျစိတျဖွငျ့တုနျတုနျရီရီလေးဖွဈနရှောပုံကတမြိုးကွညျ့ကောငျးနပွေနျသညျ။အလိုမတူရငျလေးဘကျ ထောကျခိုငျးဖို့မလှယျဘူးဆိုပမေယျ့မွနျမွနျပွီးသှားမှအေးမှာမို့အိအိငွိမျးသနျးကွိုငျပွောသလိုလုပျပေးလိုကျသညျ။
ပတျဝနျးကငျြ ကသိသှားရငျသူမဘဝပကျြသှားနိုငျတယျလေ။ ”နငျ့ဖငျကွီးကိုကော့နိုငျသမြှကော့ပေးစမျး..အားပါး…ဆရာမအိုးတဲ့…ရှိးးး… ကောငျးလိုကျတဲ့အိုးကှာ..” ပွောပွောဆိုဆိုပွညျ့တငျးစှငျ့ကားသောတငျပဆုံကွီးကိုဖွနျးခနဲရိုကျခလြိုကျသညျ။ဖွူဖှေးသောတငျပါး မှာနီရဲသှားတော့သညျ။ ထို့နောကျပွညျ့တငျးသောတငျပါးကွီးကိုကိုငျကာနရောယူလိုကျသညျ။ တောငျမတျနသေောလီးကွီးကအိ အိငွိမျး၏စောကျဖုတျဝလေးကိုတလေို့ကျမိတော့သညျ။ ထို့နောကျတော့အိအိငွိမျးကိုတုံးလုံးခြှတျပွီးခုတငျပျေါတှငျလေးဖကျကုနျး ခိုငျးကာနောကျမှနေ၍အားရပါးရဆကျဆံတော့သညျ။ ”ဗွှတျ….ဗွှတျ…ဗွှတျ…ဖှတျ…ဘှတျ…” သနျးကွိုငျ၏လီးကွီးမှမာတောငျ့ နခွေငျး၊ခါးအားသနျလှခွငျးတို့ကွောငျ့တခကျြထဲနှငျ့အဆုံးဝငျသှားလေ၏။ ”အား..အား..နာလိုကျတာ…အတငျးမလုပျပါနဲ့..အဟငျ့ အဟငျ့…..အမလေး…အား…ဟငျ့…ဟငျ့” ဆရာမလေးအိအိငွိမျးရဲ့တောငျးပနျတိုးလြှိုးသံကသနားစရာမဖွဈဘဲသနျးကွိုငျရဲ့စိတျကို ပိုဆှပေးသလိုသာဖွဈနလေတေော့သညျ။
ထို့ကွောငျ့နို့ကွီးတှကေိုဆှဲကာဆကျခါဆကျခါသာဆောငျ့ပေးနေ၏။ ဆရာမလေးအိအိ ငွိမျးမှာအရုပျကွိုးပွတျဖွဈကာဖငျဘူးတောငျးပငျထောငျနလေပွေီ။ သူမ၏ကိုယျအပျေါပိုငျးမှာမှရေ့ာနှငျ့ထိနလေပွေီ။မကွာပါ ခအြေိအိငွိမျးတယောကျလညျးစိတျပါလာပွီးကာမရညျကွညျမြားမတရား ထှကျလာလသေညျ။ထို့ကွောငျ့လိုးအားကပိုမိုကောငျး လာပွီးသနျးကွိုငျမှာပွီးလုပွီးခငျပငျဖွဈလာရတော့သညျ။ ဒါပမေယျ့ပွီးလို့ဘယျဖွဈဦးမလဲ… ဒီမိနျးမမှာလိုးစရာအပေါကျ သုံးပေါကျတောငျရှိတာ။ဒီလိုဖငျကွီးကွီးဆျောမြိုးမှဖငျမခရြငျသနျးကွိုငျငမိုကျသားဖွဈတော့မညျ။ ထို့အပွငျသနျးကွိုငျလိုကုလား တဈကောငျအဖို့ဒီလိုဖွူဖွူတောငျ့တောငျ့လေးကိုဖငျလိုးခှငျ့ရရနျအခှငျ့အရေးမှာနညျးလှသညျ မဟုတျပါလား။ သနျးကွိုငျမှာအိ အိငွိမျးပေါငျကွားထဲခေါငျးတိုးဝငျပွီးစောကျပတျလေးကိုရကျပေးလိုကျသညျ။ထို့နောကျသူ့လြှာကွမျးကွီးဖွငျ့စောကျစိ လေးကို ရကျပေးလိုကျရာအိအိငွိမျးထှနျ့ထှနျ့လူးသှားသညျ။ စောကျပတျရဲ့ပှငျ့လှာလေးတှကေိုကိုကျလိုကျ၊ဖငျဝလေးကိုရကျပေးလိုကျလုပျ နရော အိအိငွိမျးမှာကိုယျ့နို့တှကေိုယျပွနျဖဈြညှဈနရေတော့သညျ။ဘယျမိနျးမကစောကျပတျကိုအရကျမခံခငျြဘဲရှိပါ့မလဲလေ။
စောကျစပွေူ့းပွူးလေးကိုနှုတျခမျးနဲ့စုတျပေးနရေငျးစောကျပတျထဲလကျ၂ခြောငျးပူးပွီးကလိပေးလိုကျတော့ ”အား…အား… ဟငျး…ဘယျလိုမြားလုပျနတောလဲ” အိအိငွိမျးဖငျသားကွီးနှဈခွမျးကိုဆှဲဖွဲလိုကျတော့ပျေါလာတဲ့ခရပှေငျ့ကလေးကိုဝိုငျးပွီးဝလုံး လေးတှရေေးပေးနတေယျလေ။ ပွီးတော့ဖငျပေါကျထဲကိုလကျ၂ခြောငျးပူးထဲ့ပွီးကလိနတေယျ။လီးကွီးနဲ့ဖငျဝကိုတလေို့ကျပွီးလီး တနျးလနျးနဲ့တရေ့ကျကွီးမှာဖငျကို ပှတျသပျနသေေးတယျ။ဒဈကွီးတခုလုံးကိုထညျ့လိုကျတော့ဖငျဝတခုလုံးပူတကျသှားတာပဲ။ ”မ လုပျပါနဲ့….ပွနျထုတျလိုကျပါ…မလုပျပါနဲ့…အား…..အား” အိအိငွိမျးဖငျကွီးကိုခါရမျးလိုကျတော့လီးကမကြှတျထှကျသှားပဲပိုပိုပွီး ကြှံဝငျလာတယျ။ နာလိုကျတာမှအရမျးဘဲ။အရညျမှမထှကျတဲ့ဟာကို။လီးကွီးကကွီးလှနျးပွီးမဟားဒရားလုပျနတောမို့ဖငျဝလေးပါ ကှဲထှကျသှားတယျ။ အိအိငွိမျးလုံးဝမခံနိုငျတော့ဘူး။ ရုနျးလို့ကလဲမရဘူး။သလေုမြောပါးဘဲ။ကုလားကတော့ဖငျအပြိုလေးကိုပါ ကငျဖှငျ့လိုးနရေတာမို့အရသာရှိမှာပေါ့လေ။ ”တျောပါတော့ရှငျ…ကမြသပေါတော့မယျ…နာလှနျးလို့ပါ” သနျးကွိုငျလညျးဘာမှ ပွနျပွောမနဘေဲဆကျတိုကျဆောငျ့ပွီးဖငျခေါငျးထဲမှာပငျသုကျလှတျလိုကျ၏။
ဖငျဝနှငျ့ဖငျခေါငျးနံရံတလြှောကျကှဲပွဲသှားသော နရောလေးတှအေတှကျကျောထညျ့ပေးလိုကျခွငျးပငျ။ သနျးကွိုငျမှာပွီးသှားသျောလညျးလီးကွီးမှာသိပျမကသြေးပေ။ခပျမာမာပငျ ရှိနသေေးတာကွောငျ့ဆျောလေးကို ပကျလကျလှနျလိုကျပွီးစောကျပတျထဲကငျြးစိမျကာအမောဖွနေလေိုကျသညျ။ ထိုခဏမှာပငျ အိအိငွိမျးလကျကိုငျအိတျထဲကဖုနျးမွညျလာတာကွောငျ့… ”ဖုနျးကိုငျလိုကျစမျး” ဒါသနျးကွိုငျသကျသကျရဈလိုကျခွငျးပါ။အိအိ ငွိမျးကွောကျကွောကျလနျ့လနျ့နှငျ့ပငျဖုနျးကိုငျလိုကျသညျ။ ”ဟလို..” ”အငျး..အိအိငွိမျးကိုယျပါ…ပွနျရောကျပွီကားဂိတျမှာ” ”ကို့ ကိုလာကွိုလို့ရမှာမဟုတျဘူး…အဖတေို့မရောကျသေးဘူး” သူ့လငျနဲ့စကားပွောနတေဲ့မိနျးမကိုလိုးခငျြလာတာမို့သနျးကွိုငျလီးက ခကျြခငျြးမာတောငျ့လာတယျ။ အိအိငွိမျးစောကျခေါငျးထဲကလီးကွီးပွနျမာလာတာကိုသတိထားမိတယျ။ ”ကို…အငျ့…ကားငှားပွီး ပွနျ….အ…ပွနျခဲ့လိုကျနျော…အ” အခုဆိုခပျပွငျးပွငျးလိုးနပွေီဖွဈတဲ့ဆောငျ့ခကျြတှကွေားမှာအငျ့ကနဲအိကနဲအသံမထှကျမိအောငျ အိအိငွိမျးသတိထားနရေတယျ။
ဆီးစပျနှဈခုပူးကပျသှားတိုငျးတဖတျဖတျအသံတှကေတော့ထှကျနလေရေဲ့။ ”အိလေး….နေ ကောငျးရဲ့လားဟငျ” ”မကောငျးဘူး….….ကို…အု..မွနျမွနျ…..ပွနျလာနျော..” ”အငျး..အငျး…ကိုယျမွနျမွနျပွနျခဲ့မယျ…ဒါဘဲနျော” ”အငျး…အငျး” အိအိငွိမျးဖုနျးကိုမွနျမွနျခလြိုကျရတယျ။ မျောတာတပျထားသလိုတရကွမျးဆောငျ့လိုးတာကိုခံရငျးအိအိငွိမျး တျောတျောကောငျးလာတယျ။ မုဒိမျးကောငျကိုမုနျးပမေဲ့လီးကွီးကိုခိုကျသှားတာကွောငျ့စောကျပတျကိုအောကျကနပွေနျပငျ့ပေးနေ မိသညျ။ ကုလားကဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျပွီးအိအိငွိမျးနို့ကွီးတှကေိုဆှဲကာလိုးတော့သညျ။အရသာကောငျးလှနျးတာမို့အိအိငွိမျးတဈ ခြီပွီးသှား ရတော့သညျ။ ဘယျလောကျကွာကွာဆကျလိုးနသေညျမသိ။ကုလားကဆတျကနဲဆတျကနဲတှနျ့ကာအိအိငွိမျးစောကျ ပတျနံရံတှကေို လရညျပူနှေးနှေးကွီးနဲ့ဖွနျးလိုကျလသေညျ။ ခြောမောတောငျ့တငျးတဲ့သူမြားမယားအသဈစကျစကျလေးကိုလိုးနေ ရတာမို့ကုလားဒိနျသနျးကွိုငျကွာကွာမလိုးနိုငျ။
၅မိနဈလောကျနဲ့ပဲအိအိငွိမျးသားအိမျထဲကိုသုကျရတှေတေဇတျဇတျပနျးထညျ့ ပေးလိုကျသညျ။ မိမိစောကျခေါငျးထဲကုလားမုဒိနျးကောငျ၏သုကျပိုးမြားဝငျသှားပွီဟူသောအသိနဲ့စဈကနဲခံစားလိုကျရသညျ။ ထို့နောကျသူ့လီးကွီးကိုအိအိငွိမျးစောကျဖုတျထဲမှဆှဲထုတျပွီးပါးစပျနားကိုတပေ့ေးလိုကျသညျ။ ”ငါ့လရညျလကျကနျြတှစေုပျပေး စမျး” အိအိငွိမျးလညျးငွငျးဆနျလို့မရမှနျးသိပွီးစုပျပေးလိုကျရတော့သညျ။လီးထိပျအရပွေားဖွတျထားတဲ့လီးတခြောငျးကိုပထမ ဆုံး မွငျဖူးခွငျးဖွဈသညျ။အသားအရမေညျးရတဲ့အထဲဖငျကိုရော၊စောကျဖုတျကိုပါလိုးထားလို့ပပှေနသေညျ။ ဆီးစပျကလမှေး တှမှောလိမျတှနျ့နရေသညျ့အထဲရှညျရှညျးလြားလြားကွီးတှမေို့ရှံဖို့ပငျကောငျးလရေဲ့။ ထို့နောကျတှငျတော့အိအိငွိမျး ခွကေုနျလကျပနျးကသြှားတော့သညျ။ တရှုံ့ရှုံ့ငိုနလေိုကျတိုငျးအိအိငွိမျးဖငျကွီးကတုနျတုနျထှကျသှားသညျ။
ဖငျသားဖွူဖွူလေး မှာအရှိုးရာတှရှေိနသေညျ။ဖငျဝမှာဝါဖွူဖွူအရညျတှနေဲ့သှေးစလေးတှေ။ ထို့နောကျတော့ခဏစောငျ့၍လီးတောငျလာပွနျလြှငျ နောကျတဈကွိမျ…….အိအိငွိမျးရဲ့အဖုတျလေးထဲသို့သုကျရညျတှအေကွိမျကွိမျထညျ့ပေးလိုကျတော့သညျ။ အိအိငွိမျးခမြာတော့ သနျးကွိုငျရဲ့ကာမဆန်ဒရှိတိုငျးစားသုံးခံရမညျ့၊သနျးကွိုငျဧ။ျရငျသှေးမြားကိုမှေးပေးရမညျ့၊ သနျးကွိုငျဧ။ျလူမသိသူ’မသိ တိတျတိတျပုနျးဇနီးခြောလေးဖွဈတော့သညျ။ ကုလားဒိနျသနျးကွိုငျကတော့ခြောမောလှပတဲ့အိအိငွိမျးလေးကိုသူ့ကလေးတှေ တဈယောကျပွီးတဈယောကျမှေးအောငျအားကွိုး မာနျတကျလုပျတော့တာပေါ့။တခြို့နတှေ့ဆေိုရငျကုလားဒိနျသနျးကွိုငျတဈ ယောကျအိအိငွိမျးလေးကိုမင်ျဂလာဆောငျတုနျးကသတို့သမီးဝတျစုံလေးပွနျဝတျခိုငျးပွီးတဈနလေုံ့းလိုးပေးသညျ။ ထိုနမှေ့စ၍မိနျးမ ခြောလေးအိအိငွိမျးမှာကုလားဒိနျသနျးကွိုငျဧ။ျသားမယားပွုကငျြ့ခွငျးကိုနစေ့ဉျခံစားရပါတော့သညျ။
ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်အိမ်ထောင်ပြုမည်ဆိုလျှင်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရမင်္ဂလာလက်ထက်ပွဲကို ကျင်းပ လေ့ရှိကြတယ်။ နယ်ခြားနေတဲ့စုံတွဲတွေဆိုတစ်ဖက်မှာတစ်ပွဲစီကျင်းပကျတယ်။အများအားဖြင့်မိန်းကလေးဘက်မှာ ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ အချို့သောသူတွေအဖို့တစ်ပွဲသာကျင်းပသဖြင့်ကျန်တစ်ဖက်ကအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေအခက်တွေ့ ကြရတယ်။ ယခုဇာတ်လမ်းကထိုပြသနာကိုအစပြုပြီးအိအိငြိမ်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးအတွက်လမ်းနှစ်သွယ်ကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့ တယ်။ တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရင်ကျန်တစ်ခုကိုရင်နာစွာစွန့်ပစ်ရမှာပါ…။ အလယ်တန်းပြဆရာမလေးအိအိငြိမ်းချစ်သောကိုနှင့် အိမ်ထောင်ရက်သားကျပြီဖြစ်၍ကိုအလုပ်သွားချိန်စနေနေ့တွင်အိအိငြိမ်း တစ်ယောက်တည်းအိမ်တွင်ကျန်ခဲ့သည်။ အိအိငြိမ်းမှာ ကိုနှင့်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသည်မှစ၍ကိုနှင့်တစ်ခါသာချစ်ဖူးသေးသည်။ အိအိငြိမ်းမှာဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိမိန်းကလေးဖြစ်သဖြင့် ကိုကအိအိငြိမ်းငြင်းဆန်သဖြင့်အင်္ကျီမချွတ်ဖူးသေး။ ဟိုနေ့ကထဘီလေးကိုအသာလှန်ကာ၃မိနစ်ခန့်လုပ်ပြီးလျှင်ကိုကပြီးသွား သည်။ အိအိငြိမ်းမှာအသက်၂၅နှစ်ခန့်ရှိပြီးအသားလေးကဖြူဝင်းစိုပြည်သည်။ အထူးသဖြင့်နက်မှောင်နေသောဆံကေသာလေး များမှာအိအိငြိမ်းကိုမဟာဆန်၍ကျက်သရေရှိစေသည်။
အရပ်က၅ပေ၆လက်မခန့်ရှိပြီးအရပ်နှင့်လိုက်အောင်ပင်ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ နေရာနှင့်သူအချိုးကျနေသည်။ သေးသွယ်သောခါးလေးအောက်မှစွင့်ကားလုံးဝန်းသောတင်သားများနှင့်မို့တင်း၍ကြွရွနေသော ရင်သားနှစ်မွှာတို့မှာမြင်သူပုရိသတို့ကိုလည်ပြန်ငေးစေသည်။ ကျောင်းချိန်တွင်ဆိုလျှင်အိအိငြိမ်းသည်ပါးတွင်သနပ်ခါးလေးများပါး ပါးလိမ်း၍သူမဧ။်နက်မောင်လှသောဆံပင်များကိုထုံးထားသည်မှာ ခန့်ညားချောမောလွန်းလှသည်။ နေ့ခင်းအချိန်များသည် ဆရာမလေးအိအိငြိမ်း၏ကိုယ်လုံးအလှဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ဆရာမလေး၏ကျောင်းစိမ်းအင်္ကျီမှာအလွန်ပါးလွှာ သည်မဟုတ် သော်လည်းတော်တော်လေးကိုပါးသည်။ထိုအခါကျောင်းအင်္ကျီအဖြူရောင်အောက်မှာထင်ရှားလှသော အသားရောင်မြန်မာ ဘော်လီနှင့်ဝင်းဝါလှပသောနို့အုံကြီးများကိုအထင်အရှားမြင်နေရတတ်သည်။ ဆရာမ၏ဘော်လီပေါ်မှ၃ပုံ၁ပုံခန့်လျှံထွက်နေသော နို့အုံကြီးသည်လည်းမြင်သမျှယောကျာ်းတိုင်းအားစိန်ခေါ်နေသလိုဖြစ်နေသည်။
ဆရာမလေးအိအိငြိမ်းများလမ်းလျှောက်လိုက်ရင် အဖြူရောင်ခါးတိုရင်ဖုံးလေးနှင့်ကျောင်းစိမ်းထမီအထက်ဆင်လေးကြားမှပေါ်ထွက် လာတဲ့ဖြူဖွေးချောမွတ်နေတဲ့ခါးစပ်နေရာ လေးကဝင်းခနဲဝင်းခနဲ…ခပ်တင်းတင်းဆွဲစည်းထားသောအထက်ဆင်လေးအောက်မှတင်းရင်းကားထွက်နေသောတင်သားစိုင်တို့မှာ နိမ့်ချည်မြင့်ချည်ဖြင့် ခါးကျင်ကျင်လေးအောက်မှသိသာထင်ရှားစွာကားထွက်နေတယ်….တင်သားတို့ရဲ့အောက်ပိုင်းနေရာလေးမှာ လည်းသိသာထင်ရှားစွာပေါ်ထွက်နေတဲ့အောက်ခံဘောင်းဘီကြိုးလေးမှာအစင်းလိုက် အထင်းသား….စစ်ကိုင်းအိုးးးလားဂစ်တာရှိ တ်လား…မင်းကြီးကြိုက်လား..အို…..ဘာနဲ့တင်စားခိုင်းနှိုင်းရမလဲမသိတော့။ လမ်းလျှောက်ဟန်စကားပြောဟန်တို့မှာလည်းသိမ် သိမ်မွေ့မွေ့တိုးတိုးညင်းညင်းလေးဖြစ်သည်။ရုပ်ရည်လေးမှာလှသည်ဆိုသည်ထက်ချောသည်ဆိုလျှင်ပိုမှန်မည်။ တစိမ့်စိမ့်ကြည့် လေရင်ထဲထိစေသည့်အလှပိုင်ရှင်မျိုးဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာဆောင်ပြီးခါစသုံးရက်သာရှိသေးတဲ့အသစ်ဆက်ဆက်ဇနီးသည်လေးအိ အိငြိမ်းအိမ်တံခါးခေါက်သံကြောင့်အပြေးကလေး ထွက်လာမိသည်။လင်သားကိုမင်းသစ်အလုပ်ပြန်လာရင်ကြိုဖို့အလှဆုံးပြင်ပြီး အပြေးကလေးထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။တံခါးလေး ဖွင့်ပေးသောအခါကိုမင်းသစ်အပြင်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါလာလေသည်။ ”အော်…ဧည့်သည်တွေပါလား…အိမ်ထဲကြွပါရှင့်” အသီးသီးအခန်းထဲဝင်လိုက်ကြလေသည်။ ”မိန်းမရေ….ဒီနေ့ရုံးကကောင်တွေကိုလည်းပြုစုရသေးတယ်…ကိုအိမ်ပြန်နောက်ကျ လို့စိတ်မဆိုးနဲ့နော်…” အသံကနည်းနည်းမူးစပ်စပ်ဖြစ်နေသည်။ ”ရပါတယ်အကိုရယ်…အိတို့မင်္ဂလာဆောင်ကအဝေးမှာဆောင် တာဆိုတော့သူတို့ကိုပြန်ဧည့်ခံရမှာပေါ့” ”မှန်တာပေါ့မိန်းမရာ…ဒီကနှစ်ယောက်ကဒီကွန်ဒိုကအိမ်နီးနားချင်းတွေပါ..” အိအိငြိမ်း အပြုံးလေးဖြင့်နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။
မင်းသစ်လျှာလေးအာလေးဖြင့် ”ဒီဘက်ကသန်းကြိုင်တဲ့သူကရှေ့အခန်းက၊ဒီဘက်ကအောင် မောင်းတဲ့သူကအောက်ထပ်ကသူတို့ကိုပြုစုဖို့ခေါ်လာတာ၊ဒီမှာအရက်နဲ့ဘီယာပါလာတယ်…မိန်းမအမြည်းတစ်ခုခုစီစဉ်ပေး” ”ကောင်းပါပြီရှင့်…ရပါစေမယ်” အိအိငြိမ်းနောက်ဘေးခန်းကိုတည်ငြိမ်စွာထွက်သွားလေသည်။သူမရဲ့နိမ့်ချည်မြင့်ချည်တင်သား တွေနဲ့နောက်ကျောအလှကိုသန်းကြိုင်မျက်စိတစ်ဆုံးအရသာခံကြည့်ရှုလိုက်လေသည်။သူမ၏ဖင်တုံးကြီးတွေတုန်ခါသွားတာ ကြည့်ရင်းသန်းကြိုင်တံထွေးသာမျိုချနေမိသည်။ဒီဆော်လေးကိုဖင်ကုန်းခိုင်းပြီးနောက်ကနေခွလိုးလိုက်ရရင်တော့သေပျော်ပါပြီလို့ တွေးမိသည်။ သန်းကြိုင်ဒီနေ့တော်တော်တင်းနေသည်။ အလုပ်နောက်ကျလို့သူဌေးကကောသည်။ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်စောက် ကုလားတွေဘာဖြစ်တယ်၊ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဆဲခံလိုက်ရ သေးသည်။အသားမဲတာနဲ့ပဲလူလူချင်းခွဲခြားဆက်ဆံနေကြတာကိုး။ ဒီတိုက်ခန်းကမိန်းမကတော်တော်ချောတယ်။ဆရာမလေးတဲ့။ရောက်လာတာ၂ရက်ပဲရှိသေးသည်။
အခုတော့သူ့ယောက်ျားဖြစ်သူ ကမိတ်ဆက်ပေးတော့သေချာကြည့်မိသည်။ တော်တော်ချောပြီးတော်တော်လဲတောင့်ကြောင်းအနီးကပ်ကြည့်မှပိုသိလိုက်ရသည်။ ”ကဲကိုယ့်လူတို့…ကျွန်တော်လည်းသွားကူလိုက်အုန်းမယ်ခဏ…ခဏ” မင်းသစ်လည်းအိအိငြိမ်းနောက်လိုက်သွားလေသည်။မ ကြာမီအိအိငြိမ်းရောက်လာကာစားပွဲခုံပေါ်ဖန်ခွက်လေးတွေလာချပေးသည်။ စားပွဲကိုခါးလေးကုန်းကာချဖန်ခွက်ချလိုက်သည်မို့ ဟိုက်သွားသောအင်္ကျီကြောင့်အိအိငြိမ်းရဲ့ရင်သားဖွေးဖွေးနုနုတွေကိုသန်းကြိုင်နဲ့ အောင်မောင်းထပ်မြင်လိုက်ရတော့လီးတွေ တောင်ကုန်ကျသည်။အိအိငြိမ်းရင်သားဖွေးဖွေးတွေကိုဘော်လီရင်ပုံခွက်အထိသေချာ မြင်လိုက်ရတာကြောင့်သန်းကြိုင်မျက်စိထဲ ကမထွက်နိုင်တော့။ သန်းကြိုင်ကတော့အိအိငြိမ်းကိုစိတ်ထဲကနေအသေမုဒိမ်းကျင့်နေပြီ။ အိအိငြိမ်းအမြည်းစီစဉ်ရန်ထပ်ဝင် သွားပြန်ပြီ။ကုလားဒိန်သန်းကြိုင်ကကာမလိုက်စားတဲ့လူတစ်ယောက်။သူ့မှာအိပ်ဆေးတွေကွန်ဒုံးတွေအမြဲဆောင်ထားတတ်တယ်။ သန်းကြိုင်ဖန်ခွက်တွေထဲအရက်တွေထည့်ပေးထားလိုက်သည်။
အိအိငြိမ်းရဲ့ခွက်ထဲအချိုရည်ထည့်ကာ အိပ်ဆေးမှုန့်လေးခတ် ပေးလိုက်သည်။မင်းသစ်ခွက်ထဲလည်းနည်းနည်းထည့်ပေးလိုက်ပြီးဟန်မပျက်ပြန်နေလေသည်။ ကုလားဒိန်သန်းကြိုင်ကတစ် ကိုယ်ထီးသမားလူရှုပ်လူပွေ။အောင်မောင်းကတော့မိန်းမနဲ့ကလေးတစ်ယောက်နဲ့မို့သိပ်အတင့်မရဲဘဲ အကဲသာခတ်နေသည်။ မ ကြာမှီအမြည်းပွဲလေးတွေကိုင်ကာမင်းသစ်နှင့်အိအိငြိမ်းထွက်လာလေသည်။ ”အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီရှင့်…စားကြနော်အားမနာနဲ့” ”ရ ပါတယ်…ကျွန်တော်ကျွဲရိုင်းထည့်ပေးထားတယ်သောက်တယ်မလား” ”အားနာစရာရှင်…အကိုတို့ပဲသောက်ကြပါ” သောက်ကြ စားကြစကားပြောကြရင်းအိအိငြိမ်းမျက်လုံးများလေးကာခုံပေါ်မှာတင်အိပ်ပျော်သွားလေသည်။မင်းသစ်နဲ့အောင်မောင်း စကား တွေဖေါင်ဖွဲ့ရင်းမင်းသစ်လည်းများပြီးမှောက်သွားလေသည်။သန်းကြိုင်ကဟန်ပြသောက်ထားသူမို့ ”အောင်မောင်း….မင်း…ဒီ ကောင့်ကိုခဏအဖော်လုပ်ပြီးထိန်းထားကွာ…ငါအိအိငြိမ်းလေးနဲ့ခဏလောက်ကစားချင်လို့..ဟဲဟဲ” ”ဟာ…ဟေ့ကောင်ပြသနာ တက်မယ်နော်” ”မင်းကလည်းအေးဆေးပါ….နောက်နေ့မင်းအတွက်ပါဖန်ပေးမယ်” အိအိငြိမ်းကိုသန်းကြိုင်အသာဆွဲထူကာ အိပ်ခန်းဝကိုပွေ့ခေါ်သွားလေသည်။
အိအိငြိမ်းကတော့တုတ်တုတ်မလှုပ်။ သူအလွန်တပ်မက်နေသောတွေ့တာတောင်မကြာသေး သည့်မိန်းမချောလေးမို့ပွေ့ရတာတောင်အရသာရှိလွန်းလှသည်။ သန်းကြိုင်နုထွေးအိစက်နေသောအိအိငြိမ်းကိုအခန်းဒေါင့်လေးမှာ ထိုင်ရပ်သားလေးအနေအထားမှေးထားလိုက်သည်။ အဆီတစ်ဝင်းဝင်းနဲ့အိအိငြိမ်းကိုသန်းကြိုင်ကာမခံစားပြီးဖျက်ဆီးရတော့ မယ်ဆိုတဲ့အသိကြောင့်လီးအပြတ်တောင်နေလေသည်။ သောက်လဲသောက်ထားတာမို့စိတ်ကလဲစိတ်ရိုင်းဝင်မိသည်။အခန်းထဲ ရောက်တော့တံခါးပိတ်ပြီးအိအိငြိမ်းကိုကုတင်ပေါ်ကန့်လန့်ဖြတ် ပက်လက်တင်လိုက်သည်။သူမကတော့မူးနေပြီမို့မသိတော့။ သန်းကြိုင်ကဘေးနားမှာထိုင်ရင်းအင်္ကျီခါးတိုအကြပ်အောက်ကနေအသက်ရှူတိုင်းမို့မို့တက်လာတဲ့ရင်သားတွေကိုကြည့်ရင်း စိတ်က ထလာသည်။အိအိငြိမ်းကိုခုနကမှန်းခဲ့တာတွေကိုတွေးမိပြီးအိအိငြိမ်းရဲ့နို့တွေကိုလက်ကလှမ်းလိုက်ပြီးကိုင်လိုက်သည်။ အိအိငြိမ်းအင်္ကျီလးကိုအသာမ၍ချွတ်လိုက်လေသည်။အထဲကဘော်လီအသားရောင်လေးကိုပါချိတ်တွေတစ်ခုချင်းသေသေချာချာ ဖြုတ်ပစ်ပြီးချွတ်လိုက်လေသည်။စို့ချင်စရာနို့သီးခေါင်းလေးတွေကြောင့်သန်းကြိုင်တံထွေးတောင်မြိုချမိသည်။
ခဏစိတ်ထိန်းကာထမိန်လေးကိုအသာလေးဆက်ချွတ်လိုက်သည်။ အိအိငြိမ်းရဲ့ထဘီစကပ်ကိုဖိနပ်ကိုမချွတ်တော့ပဲချွတ်လိုက် သည်။ပင်တီအသားရောင်လေးပဲကျန်တော့သည်။ ဖြူဝင်းတဲ့အသားအရည်နဲ့လိုက်ဖက်လှသည်။ပင်တီပေါ်ကနေလက်နဲ့ထက် အောက်ပွတ်ဆွဲချလိုက်သည်။ အတွင်းခံလေးအောက်ကစောက်ဖုတ်မို့မို့လေးကိုကုန်းနမ်းကာအနံ့လေးခံလိုက်သည်။ ”အား… အမွှေးနံနဲ့အဖုတ်နံလေးရောပြီးသင်းနေတာပဲ” နို့တွေကိုလက်နဲ့အသာပွတ်သပ်ကိုင်လိုက်ပြီးနို့သီးခေါင်းနီနီလေးကိုငုံ့ကာစို့လိုက် တော့အင်းခနဲအသံနဲ့အတူအိအိငြိမ်းရင်ဘတ်က ကော့တက်လာသည်။အိအိငြိမ်းမျက်လုံးကတော့မဖွင့်ပေ။ သန်းကြိုင်အိအိငြိမ်း နို့တွေကိုစို့ရင်းလက်ကပေါင်တွေကိုပွတ်သပ်နေလိုက်သည်။ ပင်တီကိုချွတ်လိုက်တော့အမွှေးတွေကဆေးနဲ့ချွတ်ထားသည် ထင်သည်။ပါးပါးစုစုလေး။ သန်းကြိုင်အိအိငြိမ်းရဲ့ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုကားလိုက်ပြီးလက်ခလယ်နဲ့အဖုတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တော့ အဖုတ်ကအရည်တွေနဲ့။ အတွင်းထဲကိုဝင်သွားတော့သန်းကြိုင်လဲကလိပေးလိုက်သည်။
ဂျီစပေါ့နေရာကိုမှန်းကာခပ်ဆက်ဆက် ကလိလိုက်တော့အိအိငြိမ်းဖင်က ကြွကြွတက်လာပြီးပါးစပ်ကမတိုးမကျယ်အသံနဲ့ညည်းနေသည်။ အိပ်မောကျနေသောအိအိငြိမ်း ခမျာမိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းဖြစ်နေသည်။ မနေ့တစ်နေ့ကမှသတို့သမီးလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းမိန်းမ ချောလေးတစ်ယောက်ကိုအဝတ်တွေချွတ်နေရတာကြောင့်သန်းကြိုင်လီးကတအားတောင်နေသည်။ အိအိငြိမ်းပေါင်နှစ်ဖက်ကို ထောင်ဖြဲပြီးကားစေလိုက်သောအခါအိအိငြိမ်းနံရံကိုမှီကာအဖုတ်ဖြဲပြနေသောအနေအထားဖြစ်နေသည်။ သန်းကြိုင်ဘောင်းဘီထဲ ကဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ပြီးအိအိငြိမ်းရဲ့ချစ်စရာမျက်နှာကစပြီးရင်သားတစ်ပြင်လုံးနဲ့စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်း လှလှလေးပါပေါ် အောင်ဓာတ်ပုံများစွာရိုက်လိုက်လေသည်။ကျေနပ်အောင်မှတ်တမ်းတင်ပြီးသောအခါသန်းကြိုင်ဘောင်းဘီဆွဲချွတ် လိုက်လေ သည်။ဘောင်းဘီထဲကတုတ်ခိုင်သန်မာလှသောဂေါ်လီတပ်လီးကြီးကမတ်ခနဲထွက်လာသည်။အိအိငြိမ်းရဲ့မျက်နာနုနုလေးကိုလီးနဲ့ လေးငါးချက်ထိုးကာအလန်းဆုံးအနေအထားကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြန်သည်။နောက်ဖုန်းကိုဘေးခဏချကာနို့အုံဖွေးဖွေးတွေကိုဆုပ်ကိုင် ကာအားရအောင်စို့ပစ်လိုက်သည်။
”ဟူး….စောက်ပတ်လေးကစီးပိုင်မယ့်ပုံဘဲ” လီးထိပ်ကိုတံထွေးစွတ်ကာဘေးစောင်းလှဲပြီးအိ အိငြိမ်းစောက်ဖုတ်ဝကိုတေ့ကာစောက်ခေါင်းထဲထိုးထည့်လိုက်လေသည်။ လီးဒစ်ကျော်ရုံလောက်ထိုးထည့်လိုက်လေသည်။လက် တစ်ဖက်ကဖုန်းကိုယူကာအိအိငြိမ်းမျက်နှာနှင့်အဖုတ်ထဲလီးဝင်နေပုံကို မှတ်တမ်းယူလိုက်ပြန်သည်။သန်းကြိုင်လီးပြန်ထုတ်ကာအိ အိငြိမ်းကိုခုတင်ပေါ်ကိုယ်တစ်ပိုင်းကုန်းကုန်းလေးတင်ထားပြီး နောက်ကနေစောက်ပတ်လေးထဲလီးထိုးချလိုက်သည်။ သန်းကြိုင် လဲအိအိငြိမ်းခါးလေးကိုအသာမလိုက်တော့အိအိငြိမ်းဖင်ကြီးကကြွလာသည်။ အိအိငြိမ်းအဖုတ်ထဲကိုသန်းကြိုင်လီးထည့်လိုက်ရာ ”ဗျစ်….ဗျစ်” ”အ…ဟ….ဟ….အာ့…ဟင်….ကိုသန်းကြိုင်…” အဖုတ်ထဲသို့လီးကကြပ်ပြီးဝင်သွားရာအိအိငြိမ်းညည်းသံနဲ့အတူ မျက်လုံးပွင့်သွားပြီးနောက်ပြန်လေးလှည့်ကြည့်လိုက်ရာသန်းကြိုင်ကို တွေ့လိုက်ရတော့အလန့်တကြားဖြစ်သွားသည်။အစကသူမ မူးမူးနဲ့ကိုကိုကလုပ်ပေးနေတာလို့ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နေပြီးအဖုတ်ထဲကိုလီးကြီးပြီးဝင်လာတော့နာသွားလို့ယောင်ယမ်း မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာမှသန်းကြိုင်ကိုတွေ့တော့အတင်းရုန်းတော့သန်းကြိုင်က သူမကိုဖိထားပြီးလီးကိုအဆုံးထိထည့်လိုက် သည်။အိအိငြိမ်းခမျာအဖုတ်ထဲမှာပြည့်သိပ်စွာလီးကဝင်သွားပြီးနာသွားရသည်။
”ဖယ်…ကိုသန်းကြိုင်…မယုတ်မာနဲ့နော်…..ရှင့် သူငယ်ချင်းရဲ့မိန်းမကိုဒီလိုလုပ်စရာလား….ဖယ်နော်…ကျွန်မအော်လိုက်မှာ..” ”မ ထူးပါဘူးအိရယ်…ကိုယ့်လီးတချောင်းလုံးမင်း အဖုတ်ထဲကိုဝင်နေပြီဟာကို….အော်တော့လဲဘာထူးမှာလဲ…. ဘယ်သူကကြားမှာမို့ လဲ…ငြိမ်ငြိမ်သာလိုးတာခံလိုက်စမ်းပါ” ”ရှင်…ဟင့်…လူယုတ်မာ…အောက်တန်းစား…ကုလားပီပီခွေးကျင်းခွေးကြံကြံတယ်…ခွေး ကြီး…ဟင့်…ဟင့်” ”ငိုငို…ကြိုက် သလောက်သာငိုစမ်း…ဟဲ…ဟဲ..ကောင်းလိုက်တာကွာ….မင်းအဖုတ်ကလင်ရှိမယားဆိုပေမယ့် ကြပ်နေတာပဲ…. ရှိးးးအားးးး….လိုး လို့ကောင်းတာ…ဟားဟား” သန်းကြိုင်ကြမ်းပြီ။အစကဒီလောက်ထိကြမ်းဖို့မရှိပေ။
အိအိငြိမ်းကသူ့အရှိုက်ထိစေမယ့်စကားကိုနစ်နစ်နာနာပြောတာကြောင့်ခုနကတည်းကစိတ်ထဲမှာခပ်ကြမ်းကြမ်းမှန်းဖူးတဲ့ အခံ လည်းရှိတော့စိတ်ကလွတ်သွားသည်။အိအိငြိမ်းရုန်းရင်းကန်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းမောလာသည်။ လူကမူးလဲမူးနေတာမို့အားမပါ။ သန်းကြိုင်လဲလီးကိုမဆောင့်သေးပဲအဆုံးထိထည့်ထားရင်းနဲ့အိအိငြိမ်းရိုက်ပုတ်နေတာတွေကိုလက်နဲ့ လိုက်ဆွဲရင်းပါးစပ်ကပြော ချင်ရာတွေပြောနေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိအိငြိမ်းအားပျော့လာတော့နို့တွေကိုလက်နဲ့ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကိုင်ရင်း ”အား… ကောင်းလိုက်တာကွာ…နို့တွေကအိတင်းနေတာပဲ…ကောင်မဆေးတွေသုံးပြီးယောက်ကျားကိုဆွဲဆောင်ထားတာမလား….ဟား… ဟား….ဟား…” ”ကိုသန်းကြိုင်ရယ်….တော်ပါတော့….အိကိုသနားပါ….လွှတ်ပါတော့….အဟင့်…ဟင့်…အိ….အိ” အိအိငြိမ်းမရုန်း နိုင်တော့လေပျော့နဲ့တောင်းပန်သည်။သန်းကြိုင်ခုချိန်မှတော့မရတော့။လူကလဲမူးနေပြီမို့စိတ်ရိုင်းကဝင်နေပြီ။
နောင်ခါလာနောင်ခါဈေးလို့သဘောထားကာရှေ့ဆက်တွန်းနေသည်။နို့တွေကိုကိုင်လိုက်ညှစ်လိုက်နဲ့ပါးစပ်ကလဲညစ်ညစ်ညမ်းညမ်း တွေပြောနေသည်။အိအိငြိမ်းဘဝမှာဒီလိုတစ်တစ်ခွခွပြောတာတခါမှမကြားဖူးသလိုအပြောလဲမခံရဘူး။ ခုလိုတစိမ်းတဦးရဲ့ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကိုင်ခြင်းခံရတာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပင်။သူမယောက်ျားတောင်ခုလိုတခါမှမကိုင်ဖူး။ သန်းကြိုင်ကတစ်တစ်ခွခွ ပြောသလိုနေရာအစုံကိုလိုက်ပြီးကိုင်နေတာမို့စိတ်ကအရမ်းကိုဝမ်းနည်းလာပြီးကိုကို့ကိုအရမ်းသတိရမိသည်။ ကိုကို့ကိုသူမ သစ္စာဖောက်သလိုဖြစ်သွားပြီလို့တွေးမိပြီးမျက်ရည်ကကျလာပြန်သည်။ ဒါကိုသန်းကြိုင်ကတွေ့တော့တဟားဟားနဲ့ရယ်ပြီးနို့နှစ် လုံးကိုညှစ်ကိုင်ကာခါးအားနဲ့လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးခပ်ဆတ်ဆတ် ဆောင့်ချလိုက်တော့ ”အာ့…ကျွတ်..ကျွတ်…နာတယ်…ဖယ် ပါတော့…တော်ပါတော့…အီး…ဟီး…ဟီး…” ”ကောင်းလိုက်တဲ့အဖုတ်…ကြပ်နေတာပဲလိုးရတာ…စောက်ကောင်မအရမ်းလိုးလို့ ကောင်းတယ်ကွာ” ပြောပြောဆိုဆိုသန်းကြိုင်တယောက်ကြမ်းပြီ။
အိအိငြိမ်းတယောက်ဝမ်းနည်းပက်လက်နဲ့ငိုနေပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းအဖုတ်ထဲကလီးကို မသိမသာလက်ခံလာသည်။အရည်တွေကထွက်လာကာလီးကအဝင်အထွက်ချောလာသည်။ သန်းကြိုင်ရဲ့ဆောင့်အားကအားနဲ့မာန်နဲ့ဆောင့်နေတာမို့တချက်ဆောင့်တိုင်းအင့်ခနဲအင့်ခနဲဖြစ်ဖြစ်သွားကာသားအိမ်ဝကပူခနဲပူခနဲ ဖြစ် သွားသည်။အသိစိတ်နဲ့လူကငြင်းဆန်နေပေမယ့်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေကတဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာသည်။ ပြည့်ဝတဲ့ အရသာကတကိုယ်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပျံ့နှံ့လာသည်။ သန်းကြိုင်ကအိအိငြိမ်းနားနားကိုကပ်ကာတစ်တစ်ခွခွတွေပြောပြီး ဆောင့်နေဆဲပင်။ ”အ…ဟင့်ဟင့်…အင့်…အင့်…အင့်…တော်ပြီ…တော်ပြီ…ဟင့်…ဟင့်…” နှုတ်ခမ်းကငြင်းနေပေမယ့်သူမယောက် ကျားနဲ့ကွာခြားစွာကာမအရသာကိုပြည့်ဝစွာပေးနေတာကိုစိတ်ကတဖြည်းဖြည်းပါလာသည်။ သူမငြင်းဆန်ချင်သည်။မဟုတ်ဘူးဒါ ငါမဟုတ်ဘူး။
ငါ့ကိုတခြားလူတယောက်ကမုဒိန်းကျင့်နေတာ။ ငါလက်သင့်မခံဘူးတွေးနေပေမယ့်မူးကလဲမူးဆောင့်ချက်တိုင်းက သူမအရင်ကဘာလိုအပ်မှန်းမသိတာကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးမိတဲ့အရာကဒါပါလားဆိုတာသိသွားပြီးစိတ်ကနှစ်ခွဖြစ်နေသည်။သန်း ကြိုင်လဲအိအိငြိမ်းရဲ့အပြောင်းအလဲကိုသတိထားမိတာကြောင့်အိအိငြိမ်း နားကိုကပ်ကာစိတ်ကြွစေရန်ထပ်ပြီးတစ်တစ်ခွခွပြော လိုက်ကာလီးကိုတဆုံးထုတ်တဆုံးထည့်မှန်မှန်ဆောင့်နေသည်။ အဖုတ်ကအရည်တွေနဲ့လီးဝင်တိုင်းတဗြွတ်ဗြွတ်တဗျစ်ဗျစ်နဲ့ အသားခြင်းရိုက်တဲ့အသံကလဲအခန်းထဲမှာဆူညံနေသည်။ အိအိငြိမ်းခါးလေးကိုလက်နဲ့မ’ကာကိုယ်ကရှေ့ကိုငိုက်ထားတာမို့အိအိ ငြိမ်းဖင်ကြီးကကြွတက်နေကာလီးတချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း အတွင်းထဲကိုနက်နက်ဝင်သွားကာဖိလိုက်တိုင်းမွေ့ရာကအတွင်းဖက် ဝင်သွားပြီးပြန်ကန်လာပြန်တာမို့ဆောင့်ချက်တိုင်းက အိအိငြိမ်းအတွက်ရူးသွပ်မှုဖြစ်စေသည်။မရတော့ပေ။အိအိငြိမ်းဆန္ဒကိုအသိ နဲ့ဘယ်လိုမှထိန်းချုပ်လို့မရတော့။ အထိအတွေ့နောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားပြီ။
မိန်းမကိစ္စကိုကျွမ်းကျင်ဆရာ ကျတဲ့သန်းကြိုင်ရဲ့အောက်မှာကျရှုံးသွားပြီ။ ”အ…ဟ…ဟ…အင့်…အင့်” ”ကောင်းလား…အိ…ကောင်းလား…”မဖြေ။ဒါကြောင့် သန်းကြိုင်အိအိငြိမ်းနို့သီးခေါင်းတွေကိုညှစ်လိုက်ရင်း ”ကောင်မ…မေးနေတယ်…ငါလိုးတာကောင်းလားလို့…ခံလို့ကောင်းလားဖြေ စမ်း…” ”အား….ကျွတ်…ကျွတ်…ကောင်းတယ်….အ…ဟင့်…ဟင့်…နာတယ်” သန်းကြိုင်ပြုံးလိုက်သည်။သူတချက်ချင်းဆောင့် လိုက်ပြီးနို့တွေကိုချိုင်းအောက်ကလျှိုကာငုံ့စို့လိုက်သည်။ အိအိငြိမ်းစိတ်ကအရမ်းကိုကြွလာသည်။ ပြီးချင်လာသည်။အရမ်း အရမ်းကိုကောင်းလာကာ ”အ…အင့်…အင့်…ဆောင့်…ဆောင့်…မရပ်နဲ့…ခပ်နာနာလေးဆောင့်ပေး….ကောင်းတယ်…အန်းးးးဟ န်းးးး….ကောင်းတယ်….အန်းးးး…အန်းးး…ပြီးပြီ…အစ်အိ…ပြီးပြီ…အ…အ…အားးးး” အိအိငြိမ်းပြီးသွားပြီ။သန်းကြိုင်ဧ။် လည်ကုပ်ကိုလက်နောက်ပြန်လေးအတင်းဖက်ကာဖင်ကိုအတင်းကော့ကာကပ်ထားပြီး တဆတ်ဆတ်နဲ့ဖြစ်နေသည်။ ခြေတွေ ကကုပ်ကွေးတက်ကာပါးစပ်ကဘယ်လိုအသံတွေမှန်းမသိ။
သန်းကြိုင်လိုးလို့မပြီးသေးပေမယ့်အိအိငြိမ်းတအင့်အင့်အသံလေး သာထွက်ရင်းပြန်အိပ်ပျော်သွားသည်။ ”အားပါးပါးကျပ်လိုက်တာ…စီးလိုက်တာကွာ….မင်းသစ်တခါဘဲလိုးထားသေးတယ်ထင် တယ်” အမှန်တကယ်လည်းမင်္ဂလာဦးညတစ်ခါဘဲလုပ်ဖြစ်သေးသည်။မနေ့ကမူးမှောက်သွားလို့မလုပ်ဖြစ်။ဒီနေလည်းမင်းသစ် မှောက်ပြန်ပြီဖြစ်သည်မို့သန်းကြိုင်ကံကောင်းနေလေသည်။သန်းကြိုင်ခပ်ပြင်းပြင်းပစ်ဆောင့်နေလေသည်။ဆီးစပ်ခြင်းတစ်ဘမ်း ဘမ်းနဲ့ထိနေလေသည်။ခုမှသိတဲ့မိန်းကလေးကိုခိုးလိုးနေရတဲ့အသိနဲ့စီးပိုင်ကျပ်နေသောစောက်ဖုတ်ကြောင့်အချက်နှစ်ဆယ် လောက်နဲ့တင်သန်းကြိုင်ပြီးချင် သွားသည်။သန်းကြိုင်အားကုန်ပစ်ဆောင့်ထည့်လိုက်ပြီးအိအိငြိမ်းစောက်ခေါင်းထဲလီးတစ် ဆတ်ဆတ်တုန်ကာသုက်ရည်များပန်းထည့်လိုက်လေသည်။
”ဟူး…ငါလိုးမ…လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာကွာ” လီးပြန်ထုတ်ပြီး ဘောင်းဘီပြန်ဝတ်လိုက်ကာနောက်ဆုံးသုက်တရွှဲရွှဲအဖုတ်ထဲမှစီးကျနေသောအိအိငြိမ်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူလိုက်သည်။တစ်ရှူးဖြင့် အိအိငြိမ်းကိုသန့်စင်ပေးပြီးအဝတ်အစားတွေသေချာပြန်ဝတ်ပေးသည်။ဘော်လီချိတ်တွေကိုလည်းကျကျနနပြန်တပ်ထား ပေးလိုက်သည်။အဝတ်များဝတ်ပေးပြီးနောက်တော့ပြန်ထမ်းခေါ်လာကာခုံပေါ်ဟန်မပျက်တင်ပေးထားလိုက်လေသည်။ ”ဟေ့ ကောင်မင်းပြီးပြီလား…ဒါဆိုလည်းပြန်မယ်ကွာနောက်နေ့ငါ့ကိုလည်းဖန်ပေးဦးကွ” နောက်နေ့မနက်အိအိငြိမ်းနိုးလာတော့၃နာရီ လောက်သာရှိသေးသည်။အိအိငြိမ်းလည်းသူမကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအဖြစ်အပျက်ကို အိပ်မက်ဟုသာထင်သွားပြီးရှက်ပြုံးလေးတစ် ချက်ပြုံးမိလိုက်သေးသည်။
နောက်တစ်နေ့အိအိငြိမ်းနေ့လည်ကျောင်းပြန်အလာအိမ်တံခါးကိုသော့ဖွင့်နေတုန်းရှေ့အခန်းမှသန်း ကြိုင်အခန်းထဲမှထွက်လာ လေသည်။သန်းကြိုင်ပြုံးပြကာ ”ဆရာမအိအိငြိမ်း…မင်္ဂလာပါ” အချိုသာဆုံးအပြုံးလေးဖြင့်အိအိ ငြိမ်းပြုံးပြကာ ”ဟုတ်ကဲ့ရှင့်…ကျွန်မညကလေ…ခေါင်းတွေမူးပြီးအိပ်ပျော်သွားလို့ရှင်တို့ပြန်သွားတောင်မသိလိုက်ဘူး” သန်းကြိုင် ကတော့သူ့ရှေ့ကဖြူဖြူတောင့်တောင့်လှလှမိန်းမချောဆရာမလေးကိုကာမစပ်ယှက်ရန်ရင်ခုန်နေလေသည်။
အိအိငြိမ်းမှာကျောင်းသွားရဦးမည်ဖြစ်၍အဖြူရောင်ရင်ဖုံးအင်္ကျီခါးတိုလေးနှင့်ထဘီအစိမ်းလေးကိုဝတ်ထားသည်။ ခါးတိုအင်္ကျီမှာ ပါးလွှာသဖြင့်နောက်မှကြည့်လျှင်အထဲမှချိတ်၅ခုတပ်အသားရောင်ဘော်လီလေးကိုထွင်းဖောက်မြင်နေရသည်။ သေချာကြည့် လျှင်ဘော်လီချိတ်များကိုပင်မြင်နိုင်သည်။လွတ်နေသောခါးသားဝင်းဝင်းလေးမှာလည်းသန်းကြိုင်ကိုမြူစွယ်နေသည်။ တင်းယင်း လုံးဝန်းသောအိအိငြိမ်းဧ။်တင်သားနှစ်လုံးမှာထဘီထဲမှရုန်းကြွနေသည်။အတွင်းခံအရာလေးကိုထင်ရှားစွာမြင်နေရသည်။ ”အိအိ ငြိမ်း….” ”ရှင်…..ပြောလေ” ”အိအိငြိမ်း….ဒီကောင်မလေးကိုသိလားမသိဘူး” သန်းကြိုင်အိပ်ကပ်ထဲကဖုန်းကိုထုတ်ကာပုံတစ်ခု ကိုပြလေသည်။အိအိငြိမ်းသိလိုသိငြားစူးစမ်းကာကြည့်လိုက်လေသည်။
ပုံထဲမှာအရှက်တရားကင်းမဲ့စွာစောက်ဖုတ်အပြဲသားနှင့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပုံဖြစ်နေသည်။ အိအိငြိမ်းမျက်ခုံးလေးပင့်သက်သွားကာရင်ဝကိုစို့ရိုက်သလိုစူးခနဲဖြစ်ကာမျက်နာလည်းနီ ရဲသွားသည်။ လက်ထဲကသော့တောင်လွှတ်ကျသွားသည်။ ”သေချာကြည့်အုန်း…ဒီမှာ…ဒီမှာ” အိအိငြိမ်းလီးတစ်ချောင်းကိုနမ်း နေတဲ့ပုံတွေ၊စောက်ဖုတ်ထဲလီးဝင်နေပုံတွေ၊နောက်ဆုံးလရည်ရွှဲသောပုံတွေကိုကြည့်ပြီးအိအိငြိမ်း လဲပြိုလုမတတ်ခေါင်းတွေမူး သွားသည်။ ရှက်လွန်းလို့မျက်နာတစ်ခုလုံးနီမြန်းကာသန်းကြိုင်တို့ရှေ့ကနေကိုယ်ပျောက်သွားလိုက်ချင်မိသည်။ ”သိလားအမ…သူ့ ကိုလိုင်းပေါ်တင်ပြီးဖွမလို့” ”ဟင်ရှင်တို့ကျွန်မကိုညကဘာလုပ်ခဲ့ကြတာလည်း….ဒီပုံတွေက….အို..ရှင်တို့ယုတ်မာလိုက်တာ…ဖျက် လိုက်ပါရှင်…တောင်းပန်ပါတယ်.နော်…နော်” သန်းကြိုင်ဂွင်ရောက်နေပြီမို့ ”ဖျက်စေချင်ရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်အမခန္ဓာကိုယ် ကိုပေးမလား…ဒါဆိုဘယ်သူမှမသိအောင်ထိန်းသိမ်းထားမယ်” အိအိငြိမ်းဖောက်ပြန်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်နေသည်။ကိုမင်းသစ်ကိုသစ္စာမ ဖေါက်ချင်ပါ။
ဒါပေမယ့်ဒီဘက်ကအိအိငြိမ်းရဲ့ပုံတွေလူပုံအလယ်မှာအရှက်မကွဲဖို့လည်းအရေးကြီးနေသည်။လမ်းနှစ်သွယ်ကိုအိအိ ငြိမ်းအခက်တွေ့နေသည်။ ”ကြာပါတယ်အမရယ်…လာ” ယဉ်စစလေးဖြင့်အိနြေ္ဒရရလေးချောနေသောအိအိငြိမ်းကိုသန်းကြိုင် အခန်းထဲဆွဲခေါ်သွားလိုက်ပြီးတံခါးကိုပိတ်ကာဂျက်ထိုးလိုက် လေတော့သည်။ အခန်းထဲရောက်လို့ဂလန့်ထိုးတံခါးပိတ်ပြီးတာနဲ့အိ အိငြိမ်းပါးပြင်နုနုလေးကိုဖြန်းကနဲပိတ်ရိုက်ပစ်လိုက်သည်။ အိအိငြိမ်းခေါင်းထဲမှာကြယ်တွေ၊လတွေမြင်သွားသည်။နာလိုက်တာလဲ ပြောမနေနဲ့တော့။ မူးဝေပြီးနေရာမှာပဲလဲကျသွားသည်။ကုလားကအိအိငြိမ်းကိုပွေ့ချီလာပြီးကုတင်ပေါ်ဝုန်းကနဲပစ်ချလိုက်သည်။ ”ဘာလုပ်တာလဲ…အဟင့်” ”ပါးစပ်ပိတ်ထား…ပါးထပ်ရိုက်ပစ်လိုက်မယ်” ဒီကုလားသူ့ကိုဗျင်းတော့မယ်ဆိုတာအိအိငြိမ်းသိပေ မယ့်သိပ်မရုန်းရဲတော့ပါဘူး။ ”မလုပ်ပါနဲ့…ကျွန်မမှာလင်ရှိတယ်…မကောင်းပါဘူး” မသိစိတ်ကခပ်ကြမ်းကြမ်းပြုကျင့်ရသည်ကို အရသာတွေ့တတ်သောသန်းကြိုင်အဖို့တော့တောင်းပန်သံများကိုသနားရမည့်အစား နားဝင်ပီယံဖြစ်သောသီချင်းသံအဖြစ်သာ ခံစားနေရလေသည်။ ထို့နောက်သန်းကြိုင်ကအိအိငြိမ်း၏နုနုရွရွပါးပြင်လေးကိုဖျန်းခနဲဖြတ်ရိုက်လိုက်ပြန်သည်။
ယောက်ျားကြီး တယောက်၏အားအပြည့်တော့သုံးထားခြင်းမဟုတ်။နာကျင်မှုကိုခံစားရုံလောက်သာဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ရင်သားအစုံအား ဆုပ်နယ်ခြေမွလိုက်သည်။ အတင်းဖျစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်လိုက်သောကြောင့်အရသာမရှိဘဲနာကျင်ခြင်းကိုသာခံစားလိုက်ရသည်။ ငြင်း ဆိုတောင်းပန်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းနားလည်ထားသောကြောင့်ဘာမျှမပြောဘဲပြုသမျှကိုနုနေရရှာတော့သည်။ ထို့နောက်တော့ ကုလားကအိအိငြိမ်းအင်္ကျီကိုဆွဲဖြဲပစ်သည်။ အိအိငြိမ်းလေးရဲ့ရင်ဖုံးအင်္ကျီကိုရင်ဘတ်ကနေဆောင့်ဆွဲလိုက်တာကြောင့်နှိပ်သီးတွေ ပြုတ်ထွက်ကုန်ပြီးနို့အုံတင်းတင်းနှစ်အုံက အသားရောင်ဖျော့ဖျော့ဘော်လီလေးသာခံပြီးပေါ်လာသည်။ ရင်ဘတ် ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်သွားခြင်းနှင့်အတူအိအိငြိမ်း၏လှပပြည့်တင်းသောရင်အစုံမှာလှပစွာပြူးထွက်သွားသည်။ ဖြူဝင်းသော အသားအရည်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သောကြောင့်ရင်သားများမှာပိုမိုဖြူဝင်းကာအလွန်လှနေသည်။
အိအိငြိမ်းမျက်နှာလေးမှာနီမြန်းလျက် မျက်ရည်များပြည့်နှက်နေသည်။ ဒီနေ့ကအသိစိတ်ရှိနေတဲ့မိန်းမချောအကိတ်လေးကိုသားမယားအဖြစ်ဆက်ဆံရမှာမို့ကုလားဒိန် သန်းကြိုင်လည်းတအားထန်ပြီး အိအိငြိမ်းရဲ့ဘော်လီကိုရင်ဘတ်မှဆွဲဖြုတ်ပစ်လိုက်ရာဘော်လီနောက်ကျောချိတ်တွေသာမက လက်မောင်းကြိုးတွေပါပြုတ် ထွက်ကုန်သည်။အိအိငြိမ်းရဲ့ထွားမို့တဲ့ရင်သားလှလှတစ်စုံကိုသန်းကြိုင်အငမ်းမရကိုင်ပြီးစို့သည်။ ကုလားကဆရာမလေးအိအိငြိမ်းပေါင်ကြားမှာနေရာအသေအချာယူပြီးနို့ကြီး၂လုံးကိုကုန်းစို့တယ်။ အားနဲ့စို့လိုက်လို့အရာတွေပါ ထင်ကုန်တယ်။အိအိငြိမ်းရဲ့စောက်ပတ်အဝကိုလီးထိပ်နဲ့အသေအချာထောက်ထားမို့စောက်ရည်များ စိမ့်ကျလာလေပြီ။ ”လေး ဘက်ထောက်ပေးစမ်း” ဟုပြောလိုက်ရာအိအိငြိမ်းလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နှင့်ကုတင်ပေါ်တွင်လေးဘက်ထောက် ပေးလိုက်ရသည်။ ကြောက်စိတ်ဖြင့်တုန်တုန်ရီရီလေးဖြစ်နေရှာပုံကတမျိုးကြည့်ကောင်းနေပြန်သည်။အလိုမတူရင်လေးဘက် ထောက်ခိုင်းဖို့မလွယ်ဘူးဆိုပေမယ့်မြန်မြန်ပြီးသွားမှအေးမှာမို့အိအိငြိမ်းသန်းကြိုင်ပြောသလိုလုပ်ပေးလိုက်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင် ကသိသွားရင်သူမဘဝပျက်သွားနိုင်တယ်လေ။ ”နင့်ဖင်ကြီးကိုကော့နိုင်သမျှကော့ပေးစမ်း..အားပါး…ဆရာမအိုးတဲ့…ရှိးးး… ကောင်းလိုက်တဲ့အိုးကွာ..” ပြောပြောဆိုဆိုပြည့်တင်းစွင့်ကားသောတင်ပဆုံကြီးကိုဖြန်းခနဲရိုက်ချလိုက်သည်။ဖြူဖွေးသောတင်ပါး မှာနီရဲသွားတော့သည်။ ထို့နောက်ပြည့်တင်းသောတင်ပါးကြီးကိုကိုင်ကာနေရာယူလိုက်သည်။ တောင်မတ်နေသောလီးကြီးကအိ အိငြိမ်း၏စောက်ဖုတ်ဝလေးကိုတေ့လိုက်မိတော့သည်။ ထို့နောက်တော့အိအိငြိမ်းကိုတုံးလုံးချွတ်ပြီးခုတင်ပေါ်တွင်လေးဖက်ကုန်း ခိုင်းကာနောက်မှနေ၍အားရပါးရဆက်ဆံတော့သည်။ ”ဗြွတ်….ဗြွတ်…ဗြွတ်…ဖွတ်…ဘွတ်…” သန်းကြိုင်၏လီးကြီးမှမာတောင့် နေခြင်း၊ခါးအားသန်လှခြင်းတို့ကြောင့်တချက်ထဲနှင့်အဆုံးဝင်သွားလေ၏။ ”အား..အား..နာလိုက်တာ…အတင်းမလုပ်ပါနဲ့..အဟင့် အဟင့်…..အမလေး…အား…ဟင့်…ဟင့်” ဆရာမလေးအိအိငြိမ်းရဲ့တောင်းပန်တိုးလျှိုးသံကသနားစရာမဖြစ်ဘဲသန်းကြိုင်ရဲ့စိတ်ကို ပိုဆွပေးသလိုသာဖြစ်နေလေတော့သည်။
ထို့ကြောင့်နို့ကြီးတွေကိုဆွဲကာဆက်ခါဆက်ခါသာဆောင့်ပေးနေ၏။ ဆရာမလေးအိအိ ငြိမ်းမှာအရုပ်ကြိုးပြတ်ဖြစ်ကာဖင်ဘူးတောင်းပင်ထောင်နေလေပြီ။ သူမ၏ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှာမွေ့ရာနှင့်ထိနေလေပြီ။မကြာပါ ချေအိအိငြိမ်းတယောက်လည်းစိတ်ပါလာပြီးကာမရည်ကြည်များမတရား ထွက်လာလေသည်။ထို့ကြောင့်လိုးအားကပိုမိုကောင်း လာပြီးသန်းကြိုင်မှာပြီးလုပြီးခင်ပင်ဖြစ်လာရတော့သည်။ ဒါပေမယ့်ပြီးလို့ဘယ်ဖြစ်ဦးမလဲ… ဒီမိန်းမမှာလိုးစရာအပေါက် သုံးပေါက်တောင်ရှိတာ။ဒီလိုဖင်ကြီးကြီးဆော်မျိုးမှဖင်မချရင်သန်းကြိုင်ငမိုက်သားဖြစ်တော့မည်။ ထို့အပြင်သန်းကြိုင်လိုကုလား တစ်ကောင်အဖို့ဒီလိုဖြူဖြူတောင့်တောင့်လေးကိုဖင်လိုးခွင့်ရရန်အခွင့်အရေးမှာနည်းလှသည် မဟုတ်ပါလား။ သန်းကြိုင်မှာအိ အိငြိမ်းပေါင်ကြားထဲခေါင်းတိုးဝင်ပြီးစောက်ပတ်လေးကိုရက်ပေးလိုက်သည်။ထို့နောက်သူ့လျှာကြမ်းကြီးဖြင့်စောက်စိ လေးကို ရက်ပေးလိုက်ရာအိအိငြိမ်းထွန့်ထွန့်လူးသွားသည်။ စောက်ပတ်ရဲ့ပွင့်လွှာလေးတွေကိုကိုက်လိုက်၊ဖင်ဝလေးကိုရက်ပေးလိုက်လုပ် နေရာ အိအိငြိမ်းမှာကိုယ့်နို့တွေကိုယ်ပြန်ဖျစ်ညှစ်နေရတော့သည်။ဘယ်မိန်းမကစောက်ပတ်ကိုအရက်မခံချင်ဘဲရှိပါ့မလဲလေ။
စောက်စေ့ပြူးပြူးလေးကိုနှုတ်ခမ်းနဲ့စုတ်ပေးနေရင်းစောက်ပတ်ထဲလက်၂ချောင်းပူးပြီးကလိပေးလိုက်တော့ ”အား…အား… ဟင်း…ဘယ်လိုများလုပ်နေတာလဲ” အိအိငြိမ်းဖင်သားကြီးနှစ်ခြမ်းကိုဆွဲဖြဲလိုက်တော့ပေါ်လာတဲ့ခရေပွင့်ကလေးကိုဝိုင်းပြီးဝလုံး လေးတွေရေးပေးနေတယ်လေ။ ပြီးတော့ဖင်ပေါက်ထဲကိုလက်၂ချောင်းပူးထဲ့ပြီးကလိနေတယ်။လီးကြီးနဲ့ဖင်ဝကိုတေ့လိုက်ပြီးလီး တန်းလန်းနဲ့တေ့ရက်ကြီးမှာဖင်ကို ပွတ်သပ်နေသေးတယ်။ဒစ်ကြီးတခုလုံးကိုထည့်လိုက်တော့ဖင်ဝတခုလုံးပူတက်သွားတာပဲ။ ”မ လုပ်ပါနဲ့….ပြန်ထုတ်လိုက်ပါ…မလုပ်ပါနဲ့…အား…..အား” အိအိငြိမ်းဖင်ကြီးကိုခါရမ်းလိုက်တော့လီးကမကျွတ်ထွက်သွားပဲပိုပိုပြီး ကျွံဝင်လာတယ်။ နာလိုက်တာမှအရမ်းဘဲ။အရည်မှမထွက်တဲ့ဟာကို။လီးကြီးကကြီးလွန်းပြီးမဟားဒရားလုပ်နေတာမို့ဖင်ဝလေးပါ ကွဲထွက်သွားတယ်။ အိအိငြိမ်းလုံးဝမခံနိုင်တော့ဘူး။ ရုန်းလို့ကလဲမရဘူး။သေလုမျောပါးဘဲ။ကုလားကတော့ဖင်အပျိုလေးကိုပါ ကင်ဖွင့်လိုးနေရတာမို့အရသာရှိမှာပေါ့လေ။ ”တော်ပါတော့ရှင်…ကျမသေပါတော့မယ်…နာလွန်းလို့ပါ” သန်းကြိုင်လည်းဘာမှ ပြန်ပြောမနေဘဲဆက်တိုက်ဆောင့်ပြီးဖင်ခေါင်းထဲမှာပင်သုက်လွှတ်လိုက်၏။
ဖင်ဝနှင့်ဖင်ခေါင်းနံရံတလျှောက်ကွဲပြဲသွားသော နေရာလေးတွေအတွက်ကော်ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းပင်။ သန်းကြိုင်မှာပြီးသွားသော်လည်းလီးကြီးမှာသိပ်မကျသေးပေ။ခပ်မာမာပင် ရှိနေသေးတာကြောင့်ဆော်လေးကို ပက်လက်လှန်လိုက်ပြီးစောက်ပတ်ထဲကျင်းစိမ်ကာအမောဖြေနေလိုက်သည်။ ထိုခဏမှာပင် အိအိငြိမ်းလက်ကိုင်အိတ်ထဲကဖုန်းမြည်လာတာကြောင့်… ”ဖုန်းကိုင်လိုက်စမ်း” ဒါသန်းကြိုင်သက်သက်ရစ်လိုက်ခြင်းပါ။အိအိ ငြိမ်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နှင့်ပင်ဖုန်းကိုင်လိုက်သည်။ ”ဟလို..” ”အင်း..အိအိငြိမ်းကိုယ်ပါ…ပြန်ရောက်ပြီကားဂိတ်မှာ” ”ကို့ ကိုလာကြိုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး…အဖေတို့မရောက်သေးဘူး” သူ့လင်နဲ့စကားပြောနေတဲ့မိန်းမကိုလိုးချင်လာတာမို့သန်းကြိုင်လီးက ချက်ချင်းမာတောင့်လာတယ်။ အိအိငြိမ်းစောက်ခေါင်းထဲကလီးကြီးပြန်မာလာတာကိုသတိထားမိတယ်။ ”ကို…အင့်…ကားငှားပြီး ပြန်….အ…ပြန်ခဲ့လိုက်နော်…အ” အခုဆိုခပ်ပြင်းပြင်းလိုးနေပြီဖြစ်တဲ့ဆောင့်ချက်တွေကြားမှာအင့်ကနဲအိကနဲအသံမထွက်မိအောင် အိအိငြိမ်းသတိထားနေရတယ်။
ဆီးစပ်နှစ်ခုပူးကပ်သွားတိုင်းတဖတ်ဖတ်အသံတွေကတော့ထွက်နေလေရဲ့။ ”အိလေး….နေ ကောင်းရဲ့လားဟင်” ”မကောင်းဘူး….….ကို…အု..မြန်မြန်…..ပြန်လာနော်..” ”အင်း..အင်း…ကိုယ်မြန်မြန်ပြန်ခဲ့မယ်…ဒါဘဲနော်” ”အင်း…အင်း” အိအိငြိမ်းဖုန်းကိုမြန်မြန်ချလိုက်ရတယ်။ မော်တာတပ်ထားသလိုတရကြမ်းဆောင့်လိုးတာကိုခံရင်းအိအိငြိမ်း တော်တော်ကောင်းလာတယ်။ မုဒိမ်းကောင်ကိုမုန်းပေမဲ့လီးကြီးကိုခိုက်သွားတာကြောင့်စောက်ပတ်ကိုအောက်ကနေပြန်ပင့်ပေးနေ မိသည်။ ကုလားကဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီးအိအိငြိမ်းနို့ကြီးတွေကိုဆွဲကာလိုးတော့သည်။အရသာကောင်းလွန်းတာမို့အိအိငြိမ်းတစ် ချီပြီးသွား ရတော့သည်။ ဘယ်လောက်ကြာကြာဆက်လိုးနေသည်မသိ။ကုလားကဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲတွန့်ကာအိအိငြိမ်းစောက် ပတ်နံရံတွေကို လရည်ပူနွေးနွေးကြီးနဲ့ဖြန်းလိုက်လေသည်။ ချောမောတောင့်တင်းတဲ့သူများမယားအသစ်စက်စက်လေးကိုလိုးနေ ရတာမို့ကုလားဒိန်သန်းကြိုင်ကြာကြာမလိုးနိုင်။
၅မိနစ်လောက်နဲ့ပဲအိအိငြိမ်းသားအိမ်ထဲကိုသုက်ရေတွေတဇတ်ဇတ်ပန်းထည့် ပေးလိုက်သည်။ မိမိစောက်ခေါင်းထဲကုလားမုဒိန်းကောင်၏သုက်ပိုးများဝင်သွားပြီဟူသောအသိနဲ့စစ်ကနဲခံစားလိုက်ရသည်။ ထို့နောက်သူ့လီးကြီးကိုအိအိငြိမ်းစောက်ဖုတ်ထဲမှဆွဲထုတ်ပြီးပါးစပ်နားကိုတေ့ပေးလိုက်သည်။ ”ငါ့လရည်လက်ကျန်တွေစုပ်ပေး စမ်း” အိအိငြိမ်းလည်းငြင်းဆန်လို့မရမှန်းသိပြီးစုပ်ပေးလိုက်ရတော့သည်။လီးထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားတဲ့လီးတချောင်းကိုပထမ ဆုံး မြင်ဖူးခြင်းဖြစ်သည်။အသားအရေမည်းရတဲ့အထဲဖင်ကိုရော၊စောက်ဖုတ်ကိုပါလိုးထားလို့ပေပွနေသည်။ ဆီးစပ်ကလမွှေး တွေမှာလိမ်တွန့်နေရသည့်အထဲရှည်ရှည်းလျားလျားကြီးတွေမို့ရွံဖို့ပင်ကောင်းလေရဲ့။ ထို့နောက်တွင်တော့အိအိငြိမ်း ခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားတော့သည်။ တရှုံ့ရှုံ့ငိုနေလိုက်တိုင်းအိအိငြိမ်းဖင်ကြီးကတုန်တုန်ထွက်သွားသည်။
ဖင်သားဖြူဖြူလေး မှာအရှိုးရာတွေရှိနေသည်။ဖင်ဝမှာဝါဖြူဖြူအရည်တွေနဲ့သွေးစလေးတွေ။ ထို့နောက်တော့ခဏစောင့်၍လီးတောင်လာပြန်လျှင် နောက်တစ်ကြိမ်…….အိအိငြိမ်းရဲ့အဖုတ်လေးထဲသို့သုက်ရည်တွေအကြိမ်ကြိမ်ထည့်ပေးလိုက်တော့သည်။ အိအိငြိမ်းခမျာတော့ သန်းကြိုင်ရဲ့ကာမဆန္ဒရှိတိုင်းစားသုံးခံရမည့်၊သန်းကြိုင်ဧ။်ရင်သွေးများကိုမွေးပေးရမည့်၊ သန်းကြိုင်ဧ။်လူမသိသူ’မသိ တိတ်တိတ်ပုန်းဇနီးချောလေးဖြစ်တော့သည်။ ကုလားဒိန်သန်းကြိုင်ကတော့ချောမောလှပတဲ့အိအိငြိမ်းလေးကိုသူ့ကလေးတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်မွေးအောင်အားကြိုး မာန်တက်လုပ်တော့တာပေါ့။တချို့နေ့တွေဆိုရင်ကုလားဒိန်သန်းကြိုင်တစ် ယောက်အိအိငြိမ်းလေးကိုမင်္ဂလာဆောင်တုန်းကသတို့သမီးဝတ်စုံလေးပြန်ဝတ်ခိုင်းပြီးတစ်နေ့လုံးလိုးပေးသည်။ ထိုနေ့မှစ၍မိန်းမ ချောလေးအိအိငြိမ်းမှာကုလားဒိန်သန်းကြိုင်ဧ။်သားမယားပြုကျင့်ခြင်းကိုနေ့စဉ်ခံစားရပါတော့သည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဆရာမလေးကိုသားမယားပွုကငျြ့ခွငျး
ကြှနျတျော တကယျခဈြခဲ့မိသော အခါ
ပွဿနာ ရဲ့ အစ